Nepali LOL News
सूचना ! यो साईट अस्लिल यौन कथा ले भरियको छ त्यसैले रुचि नभएको खण्डमा नहेर्न पनि सकिन्छ..१८ बर्स नपुगेका किशोर किशोरिहरु अनि १२ कक्षा भन्दा तलका बिधार्थि हरु लाई यो साइट हेर्न सख्त मनाई छ।
यो साईट मा भएका सम्पूर्ण बिषयबस्तु हरु सबै यौन सँग सम्बन्धित भएका ले उमेर्, स्थान र समयको ख्याल गरेर मात्रै पढ्नु होला धेरै कथाहरु अती नै छाडा, अनैतिक तथा असामजिक बिषयबस्तु मा आधरित हुनाले कथाको मुताबिक यथार्थ जिबन मा हुबहु नक्कल नगर्न हुन र यसलाई कुनै शिक्षा को रुपमा नलिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।यो खली एकैछीन को उत्तेजना शान्त पार्न मात्र पढ्नुहोला । तर यो कथाहरु एक्लै हुँदा हस्तमैथुन गर्न र यौन जोडी भए धेरै पटक यौन सम्पर्क गर्न भने धेरै नै काम लाग्ने छन. यो केवल अश्लिल यौन कथा हो, यो शिक्षाप्रद पनि छैन । केवल क्षणिक मनोरञ्जनको लागी भएकोले तपाइलाई रुचि नभएको खण्डमा नहेर्न पनि सक्नुन्छ ।
साथीको बुढी चिकेर गर्ववती बनाउँदा....
12:49 AM khabarexpress Nepal No comments
मेरो अफिस तराई तिरको ठुलो कम्पनि थियो । हामि १० बर्सदेखि त्यो कम्पनिमा सङै काम गर्ने हुदा निरजन र म धेरै नै मिल्ने सथि म्है सकेको थियो। निरजन् को घरमा मेरो रम्रो नै आउने जाने भैरेको थियो। निरजन् अलि दुब्लो अनि पातलो जिउडालको थियो भने मेरो सरिर ठिक्क को थियो। निरजन् को बिहे पनि त्यहि गाउको १ जना केटि सङ भयो। जुन केटि सङ मेरो पनि पहिला नै राम्रो परिचय थियो। बिहे पछि नि त्यो केटिलाई म उस्कै नाम ले बोलाउथे। उस्को नाम सुस्मिता थियो। मैले जब निरजन् को घर जान्थे त सुस्मिता लाई पनि के छ महनेर सोद्थे। उनि पनि नर्मल नै जबाफ् दिन्थिन्। निरजन् को बिहे भयेको २ साल हुदा पनि उन्का कुनैबच्चा भयका थियन। म सुस्मिता लाई सधै सोध्थे के हो तिमिहरुको बुढा बुढिको होइन रातमा माया प्रेम हुदैन कि के हो खोइ आज शम्म त बच्चा त भयेको छैन त? सुस्मिता केहि बोल्दिन थिन। निरजन् भने हसेर नै टार्थे। मैले सोधे के हो कुरा? १ दिन निरजन् ले नै भ्न्यो उस्को बचचा हुन धेरै गर्हो छ रे। यो कुरा सुस्मिता ले पनि थाहा पायकि रहिछन्। र भन्दै। मैले १ दिन सुस्मिता लाई भने हेर सुस्मिता यो समाज मा बच्चा न्भैइ कन बस्न धेरै गार्हो छ है बेलैमा बुद्धि पुर्याउ। उस्ले म सङै सोधि य्स्तो कुरा मा कुन बुद्धि लगाउने? मैले सिधै भने कोहि बिर्य डोनर लाई भेट। उ पहिला त केहि बोलिन तर पछि भन्न थलि कि मैले कहा खोज्ने।?
मैले ढुक्क सङग भने म छदै छु नि।। सुस्मिता आतिदै भनि हजुर त निरजन् को साथि यस्तो कुर कसरि सम्भब होला। मैले भने बस तिमि आट गर म सब थोक मिलाउछु। उस्ले नबोलेर सहमति दिई। यस् बिचमा हामिले धेरै नै कुराहरु गर्योउ कि सुस्मिता ले मन् मनै म सङग सेक्स को कल्पना गर्न थलेको जस्तो उस्को अनुहार बट प्रस्ट हुन्थ्यो।
कुरा निरजन् को ट्रेनिग् को लागि १० दिन बाहिर जाने बेला भयो मैले पहिला नै सुस्मिता लाई भनेको थिय ।।ल है यहि हो समय। मैले नै प्लान बताया जब निरजन् बाहिर जान्छ म राति उन्को कोठा मा आउने र रात बिताउने योजना बताय।योजना को मुताबिक म निरजन् ट्रेनिङ गयेको पहिलो रात नै सुस्मिता को कोठा मा प्रबेस गरे।
जब म उन्को कोठा म पसे उनलाई च्याप्प अंगालोमा हालेर किस गर्न थाले । उनी पनि आँख चिम गरेर मलाई किस गर्न थाली । हामी दुईको मुख मुख जोडिएको थियो । कहिले म उसको जिब्रो चुस्थे , कहिले उ मेरो जिब्रो चुस्थी ……….. बिस्तारै बिस्तारै कपडा बाहिर बाटै उसको दुध माड्न थाले । देब्रे हात ले दुध माड्दै दाहिने हात बिस्तारै बिस्तारै उसको पुती तिर लगे । । मेरो लाँडो पनि ठन्किएर पेन्टनै च्यातुला झै भइ राथ्यो । बिस्तारै मैले उसको टी-शर्ट खोलिदिए , अनि ब्रा पनि खोलि दिए । कडा कडा दुधको पोका, आहा मुखै रसाएर आयो र उसको दुधको मुण्टो चुस्न थाले । बिस्तारै बिस्तारै दुधको मुण्टो जिब्रोले चलाउन थाले , उसलाई पनि असह्य भएछ , “आहहहहहहह………. सीसीसीसी…………… ओहहहहहहहहहहह” कराउन थाली । देब्रे दुध चुस्दा दाहिने दुध हातले माड्थे , दाहिने दुध चुस्दा देब्रे दुध …… यसरी नै १० मिनेट जती चुसी रहे । मलाई पनि अब खपि नसक्नु भईसकेको थियो । हतार हतार मेरो सबै लुगा खोले अनि नाङगै भए । फेरि अंगालो हाले र किस गर्न थाले । दुबै हात हरू दुधको पोका माड्न व्यस्त थिए । मैले उनको हात समातेर मेरो लाँडो तिर पुर्याए । उनले बिस्तारै बिस्तारै मेरो लाँडो खेलाउन थाली । म चै बिस्तारै बिस्तारै पेन्टी बाहिरबाटै उनक पुती खेलाउन थाले । पुक्क फुलेको पुती , हातमा महसुस भई राथ्यो । केही बेर बाहिरबाटै खेलाए पछि , उसको पेन्टी खोलिदिए । आहा ………… हल्का कैलो कैलो भुत्तला , ट्याप्ट टाँसिएको मुख …….. छेउ छेउबाट अलि अलि पानी चुहि रहेको ………… बिस्तारै औलाले उको पुतीको मुख फटाए र यसो हेरको त , ओहो ………… सानो गुलाबी रङको टीसी , टीसी वरीपरि भिजेको ………. छेउछेउमा पुतीको भुक्क फुलेको भाग …………. पुती भनेको त यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो ।
मैले बिस्तारै नम्रतालाई खाटमा सुताए , उनको गालामा किस गरे , बिस्तारै बिस्तारै तल तल किस गर्दै गए । गालाम , घाँटीमा , छातीमा , दुधमा , भुँडीमा , नाईटो वरपर , तिघ्रामा , कापमा , खुट्टमा , पाईतालाम ……………. उनको शीर देखि पाउ सम्म किस गरे । मेरो किसको असर देखिई रहेको थियो । उनी “आहहहहहहहह…………… ओहहहहहहहहहहहहहह………… उहहहहहहहहहहहहहह…………. ससससस……….. ” गर्दै लामो लामो सास फेर्दै थिई । बिस्तारै म माथी तिर लागे र पुतीको वरी परी किस गर्न थाले । यहाँ किस गर्दा चै उसलाई खपि नसक्नु भएर क्यार ……. च्याप्प मेरो टाउको समाएर पुती तिर मेरो मुख लगी । उको पुतीबाट एक प्रकारको बासना आईरहेको थियो , बासनाले मेरो चिकाईको प्यास झनै बढाउन थालेको मैले महसुस गरे । उसले मेरो कपाल झन कस्सेर च्याप्प समाती , स्वाँ ……स्वाँ….. गर्दै लामो लामो सास फेर्न थाली । मैले उसको दुबै खुट्टा फटाए , पुतीको मुख पनि खुल्यो । बिस्तारै पुतीमा मुख पु्र्याए र गुलाबी रङको टीसीलाई जिब्रोले खेलाउन थाले । उसलाई सारै मजा आएछ , आहहहहहहहहहहह आहहहहहहहहह कराउन थाली । जिब्रोले घरी टीसी , घरी पुतीको छेउ खेलाउन थाले । केहि क्षण पछि मेरो पुरै जिब्रो पुती भित्र छिराएर खेलाउन थाले । यसो गर्दा उसलाई झन असह्य भएछ , “मजा आयो , प्लिज यसरी नै गर्नु न एकछिन ….. आहहहहहहहहहहहहह …………..ओहहहहहहहहहहहहहहहहहह” म पनि लगातार उसको पुती चाट्न थाले , पुतीको पानी पिउन थाले । ५ मिनेट पछि म उठे र मेरो लाँडो लगेर उसको पुती छेउमा राखे । हातले लाँडो समाएर पुतीको वरीपरी खेलाउन थाले । “अब छिटो गर्नु न प्लिज , मलाई गाह्रो भईसक्यो …… प्लिज छिराउनुन ……. प्लिज ……. प्लिज………” उनी कराउन थाली । ” ल ल , अब गर्छु ” भन्दै बिस्तारै मेरो लाँडो पुतीमा छिराउन खोजे ।
शायद मेरो लाडो अलि मोटो भएकोले गर्दा होला या टाईट पुती भएकोले गर्दा हो , सजिलै छिरेन । मेरो पालो लाडोमा थुक दले र फेरि छिराउने प्रयास गरे । अहिले भने आधा जति छिर्यो । “ऐया दुख्यो , तपाईको त कत्रो मोटो रहेछ , बिस्तारै गर्नु है , मलाई पोल्न थाल्यो ” । “ल ल , बिस्तारै गर्छु ” भन्दै बिस्तारै बिस्तारै लाँडो छिराउन थाले । उनी “ऐया , आथा …..” कराउँदै थिई , म चै बिस्तारै बिस्तारै छिराउन थाले । अब चै पुरै लाँडो छिरी सकेको थियो , र पनि ऐया …. आथा भन्ने कराउछ छाडी सकेकी थिई । म उसको दुध चुस्दै बिस्तारै बिस्तारै हल्लिन थाले , उ पनि मलाई च्याप्प समाउँदै तल बाट धकेल्न थाली । मेरो चिकाईको स्पीड बढ्दै गयो , जति स्पीडले चिक्थे , उनी पनि कराउन थाल्थी “आहहहहहहहहहहह…………. ओहहहहहहहहहहहहह………… सीऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ …………… उहहहहहहहहहहहहहहहहहह………………. अझै……….. अझै……….. कस्सेर ………….. कस्सेर…………..” उसको हेरक आवाजले मलाई चिक्ने हौसला दिईरहेको थियो । म बल गरी गरी चिक्न थाले । केही क्षण चिके पछि , मैले उसलाई उठाए अनि घोप्टो पर्न लगाए । ” अब यसरी गर्ने ल ” मैले भने । “हुन्छ , तपाई त खप्पिस हुनुहुँदो रहेछ है , मलाई आज जस्तो मजा कहिले आको थिएन ।‍ । उ घोप्टो परिसकेकी थिई , मैले बिस्तारै उसको पुतीमा मेरो लाँडो छिराउन थाले । “ऐया , यसरी गर्दा दुख्ने रहेछ , बिस्तारै गर्नु है ” उनले भनी । “हुन्छ हुन्छ , बिस्तारै गर्छु ” भन्दै उनको पुतीमा लाँडो छिराए । पुक्क फुलेको पुतीमा घोप्टो पारेर चिक्नुको मजा नै बेग्लै हुने रहेछ । मैले बिस्तारै बिस्तारै चिकाईको रफ्तार बढाउँदै गए , उनी पनि मलाई साथ दिदै गई । १० मिनेट जति चिके पछि ” मेरो त झर्न लाग्यो मेरो पालो झन बल गरेर कस्सी चिक्न थाले । १०-१५ चोटि हल्लिए पछि , मेरो माल झर्ला जस्तो भयो र एक चोटि कस्सेर धक्का दिए , मेरो माल ह्बात्तै निस्कयो , मेरो पाईतालाबाट जमीन नै झरे जस्तो भयो , म उनको ढाँड माथी ड्वाङ ढले । उनी घोप्टो परेर बसी रही म उनको माथी लडी रहे । थाकेर लोत भाको थिए , हलका चीसो मौसममा पनि पसिनै पसिना भाको थियो हामी दुबैको जीउ । म पनि स्वा……… स्वा….. गर्दै थिए , उनी पनि स्वा….. स्वा ……… गर्दै थिई । ५ मिनेट जति यतिकै बसे पछि , म उसको छेउमा पल्टे , उनी पनि उतानो परी । मैले भने तिम्रो पुरा पुतिनै मेरो फुसिले भरेको छु अब त १ पटक मा नै २ वटा घोर्ले छोरो पाउचेउ तिमिले। उ पनि मख्ह हुदै भनि ल भगवान को कृपा भय होला नि। मैले भने भगवान को कृपा भयेर हुदैन माल मा दम हुनु पर्छ। उ हासि मत्रै। त्यो दिन् देखि मैले ९ दिन् शम्म हर रातको ३ पटक को दरले चिकेर सुस्मिता लाई गर्भबति बनयर नै छाडे। आज्कल पनि म उस्लाई सोद्छु होइन तिमिलाई अर्को छोराको रहर छैन? उ हास्दै जिस्किदै भन्छे मेरो रहर नभको होइन खोइ निराजन आज्कल ट्रेनिङ जदाइनन र पो त मार्यो। तर पनि म कहिले कहि दिउसो नै १ पटक सुस्मिता लाई चिकेर निस्किन्छु। कन्डम लगायर।
12:41 AM khabarexpress Nepal No comments
12:37 AM khabarexpress Nepal No comments
त्यो बेला मेरो उमेर त्यस्तै १४ बर्स भयेको थियो होला म काठमान्डौ मा १ ईन्डियन ब्यापारि को घर मा काम गर्न बसेको थिय। म बिहन पढ्न जान्थे भने दिउसो घरमा नै हुन्थे। मेरो साहुको घरमा साहुका बुढा बुढि अनि उनैहरुका २ वटा छोरा थिय। ति छोरा हरुलाई पनि ईन्डिया मा बोडस गरेर राखेका थिय ।दिउसो घरमा म र साहुनि मत्रै हुन्थेउ। साहुनिले मलाई सधै आफ्नै बच्चा जस्तो गरेर रख्नु भयेको थियो। साहुनि को उमेर पनि त्यस्तै ३०-३२ बर्सको थियो होला। साहु त्यति राम्रो नभय पनि साहुनि असाध्य रामृ अनि चिटिक्क परेको ज्यान थियो।
१ दिन को कुरो हो घरमा म र साहुनि मात्र हुनुहुन्थ्यो र साहुनि ले मलाइ बोलाउनुभयो र भन्नुभयो रामु माथि आउ र म पनि माथि चोटामा गएँ र साहुनि ले भन्नुभयो रामु मलाइ जिउ दुख्यो अलिकति तेल लगाइदेउन भन्नुभयो र नुहाउन लागेको जस्तो पेटिकोटमा मात्र हुनुहुँदो रहेछ र हुन्छ भनेर तेल लगाइदिन थाले उहाँले अगाडीपनि तेल लगाइदेउ रामु भन्नुभयो र मैले हुन्छ भनेर अगाडी पनि तेल लगाइदिन थालेँ। तेल लगाइदिने क्रममा ढाडमा लगाइसकेपिछ उहाँले अगाडी पनि भन्नुभयो मलाइ लाज लागेर आयो र अगाडी पनि भनेँ उहाँले हो भन्नुभयो र विस्तारै अगाडी पनि तेल लगाइदिन थाले उहाँले पेटिकोट तल सानुर्भयो मलाइ अस्सह्य भए र आयो तै पनि केही गर्ने आँट आएन र मालिस गरिदिदैँ गए मालिस गरिदिँदा उहाँ त झन आनन्द मानेर पो बस्नुभयो । उहाँले अलि तल पनि मालिस गरिदे रामु भन्नुभयो मैले हुन्छ भनेर मालिस गर्दै जाँदा म साहुनि को ठ्याक्कै योनिमा पुँगे पुरा जंगल रैछ मैले केटीको योनि पहिलो पल्ट छोएको मलाइ सार्है अर्कै के के छोए जस्तो भयो तर उहाँले मेरो हात च्याप्नुभयो उहाँको खुट्टाले मलाइ पनि आनन्द आयो र उहाँको योनि चलाइदिए बिस्तारै उहाँ जुरूक्क उठेर बस्नुभयो मलाइ डर लाग्यो तर उहाँले मलाइ अंगालो हाल्नुभयो मेरो गाला टोकिदिनुभयो । मैले यो भन्दा अगाडी कुनै केटीलाइ चिकेको थिएन तर चिकेको देखेको थिएँ । उहाँले मलाइ ब्लाउज खोलेर रामु बु बु खा भन्नुभयो आह उहाँको दुध सार्हैठूला थिए लगभग सिरानी पुग्ने र च्याप्प समाते उहाँले आ……………हा…………………आउच्…………… भन्नथाल्नुभयो र पछि म पनि उहाँको दुध चुसिदिन थाँले ।
मलाइ पनि मज्जा आउन थाल्यो र त्यो बेलामा साहुनि ले सोध्नुभयो रामु तैले कसैलाइ यसरी चिकेको थिइस् भनेर मैले छैन भने…………. ल त्यसो भए आज मलाइ चिक है भन्नुभयो मलाइ पनि के खोज्छस् कानो आँखो भनेझैं भयो र हुन्छ भने र दुध जति चुस्यो त्यती सानीआमाले मलाइ नजिक तान्न थाल्नुभयो । र बिस्तारै म पनि तल सर्दै जान थाले जब म पेटिकोट नेर पुँगे उहाँको पेटिकोटको इजार फुकालेर पेटीकोट तलसाँरे म हेरेको हेर्यै भए । सायद मैले पहिला कुनै केटीको पुती त्यसरी नदेखेकोले हुनसक्छ म सार्है अत्तालिएँ र च्याप्पै उहाँको त्यो भुत्लामा हात राँखे उहाँले आखाँ चिम्लिनुभयो र कम्मर उठाउनुभयो र म पनि मज्जाले उहाँको योनी चलाउन थालेँ र त्यहाँबाट र पानीपो आयो र मेरो लाँडो बाहिर निकाल्नुभयो मेरो लाँडो नि मोटो थियो र उहाँले व हो कत्ति मोटो भन्नुभयो यति भनुन्जेलसम्म मेरो लाँडो पहिलानै ठन्कीसकेको थियो । उहाँले मेरो लाडो चुस्न थाल्नुभयो मलाइ त उँडु की के गर्रो भयो र मलाइ पनि उहाँको योनी चाट भन्नुभयो सुरूमा त घिन लागेर आयो तर पुती चाट्न थालेँ मैले र उहाँले मेरो लाडो चलाउन छोड्नुभएन मैले जति चाट्दै जान थाले उहाँले त्यती मेरो मुन्टो उहाँको तिघ्राले च्याप्न थाल्नुभयो र मैले पनि असाध्यै मज्जाले चाटिदिएँ । त्यो बेलामा उहा आ………………………………उ……………………………….अ…………………इ……………… भन्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा उहाँलाइ अस्सह्य भएछ र रामु अब मलाइ चिक भन्नुभयो मैले एकछिन न कस्तो मज्जा आउँदैछ भने र फेरी चाट्न थालेँ । अ…हा…….ऊ…………… च…………………. गरी कराउन थाल्नुभयो र उहाँ आफै आएर मेरो लाडो समातेर मलाइ खाटमा सुताउनुभयो र आफैले मेरो लाँडोको टुप्पोलाइ आफ्नो पुतीको मुखमा राखेर बिस्तारै बस्नुभयो म माथि अलिकित मात्र छिर्यो र एय्या भन्नुभयो र उहाँ सुत्नुभयो र म माथि बाट आएर बस्तार फेरी पुतीको मुखमै राखेर बिस्तारै धक्का दिएँ यसपाली अलि बढी बाढी आएको रहेछ भित्रबाट फुत्तै भित्र छिर्यो र उहाँले अलि बिस्तार दुख्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । मैलेपनि हवस भनेर बिस्तार गर्न थाले र अब उहाँलाइ पनि पिडा हराएछ जस्तो छ कम्मर उचाल्न थाल्नुभयो र मैले पनि जोडले भित्र बाहिर गराउन थालेँ त्यो बेलामा उहाँको मुख बाट उफ्…………………आ……………………आउच…………………………….. अलि सार्हो जस्ता शब्द निस्कदै थियो मलाइ 2० मिनेटपछि भत्रैदेखि केही कुरा खस्न लागेको जस्तो भयो र मैले भित्रै भित्तामा पुग्ने गरी झड्का दिए उहाँलेनि मलाइ बेस्कन च्याप्नुभयो । र मेरो माल उहाँको पुतीभित्रै खस्यो यति हुन २ घण्टा लाग्यो र हामीले हतार हतार लुगा लगायौ र साहुनि ले मलाइ म्वाइँ खानुभयो
जब सम्म म त्यो घर मा थिय प्राय साहुनि र म चिक्ने गर्थेउ। तर साहुले थाहा पाय कि के भो कुन्नि अब हामि घरमा काम गर्न लाई मान्छे नराख्ने भन्दै मालाई घर बाट निक्लन भने। आज म अन्तै जागिर खान थालेको छु।
12:36 AM khabarexpress Nepal No comments
त्यति बेला मेरो उमेर त्यस्तै १६ भयेको थियो होला। घरमा म यक्लि छोरि हुनाले घरको रेखदेख सबै म नै गर्थे। म बिहान बिहान पढ्न जान्थे। बाकि दिन् भरि नै घरमा हुन्थे। ममि ड्याडि पनि दिनमा नै कुनै सरकारि आफिस मा काम गर्नु हुन्थ्यो। हाम्रो घरको काम मा सहयोग गर्न गाउ बाट १ बर्श पहिले बाबा ले १० बर्सहो यक जना केटा लेराउनु भाको थियो। केटाको उमेर सानि नै भये पनि उस्को जिउ डाल सपृ सकेको थियो। केटा पनि दिउसो स्कुल जान्थ्यो म बिहान कलेज जान्थे। हाम्रो भेट प्राय बेलुका नै हुन्थ्यो । उस्ले मलाई दिदि भनेर बोलाउथ्यो र मसङ कुनै हिचकिचहट बोल्चाल गरि रहन्थ्यो। बानि ब्याभार बच्चा जस्तो नै थियो।
जेठ महिनाको १ दिन को कुरा हो , म आफ्नो कोठाभित्र पढ्न बसेकि थिएं । दिउँसोको त्यस्तै साढे बार बजेको हुंदो हो । बाहिर लागेको चर्को घामले रुखविरुवाका पातहरु लल्याकलुलुक भएर ओईलिएका थिए । थोपै हावा नचलेर बसिनसक्नु भएको थियो मेरो कोठा अझ त्यसमाथी माथीबाट जस्ताको छानो तातिएर पग्लेला झैं भएको । त्यो उखुम गर्मीमा म किताब खोलेर त बसेकि थिएं तर पढाईमा भने पटक्कै मन थिएन । बैसाख जेठको गर्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुं कि पोईला जाउं जस्तो हुन्छ भन्थे सांच्चै त्यस्तै भएको थियो मलाई । कोठाभित्र गुम्सिएर म अनेक रंगीन कल्पनामा डुब्दै थिएं । मेरो शरिरमा पातलो सुतीको म्याक्सी मात्र थियो ।
म्याक्सीभित्र पेण्टी र ब्रा फुकालेर मिल्काई सकेकि थिएं । एक त गर्मीले गर्दा शरिरमा टाँसिने कपडाहरु लगाउनै नसकिने त्यसमाथी यसरी रोम रोम रोमाञ्चित हुने कल्पनाको रंगीन संसारमा डुब्दा मलाई त्यस्ता कपडाहरुले अवरोध खडा गरेको महसुस हुने गर्छ । पढ्नको लागी खोलेको किताब खुल्लै मेरो पेटमाथी घोप्टो परेर नाईटोमा मुख जोतिरहेको थियो ।
म यौटा हातले म्याक्सी माथी बाटै आफ्नै छाती खेलाईरहेकि थिएं । मलाई आफैंले छाती खेलाउंदा थोरै दुख्ने गरेर स्तनको मुण्टो निचार्यो भने आनन्द लाग्छ - त्यसैले पनि होला मेरो छातीको गोलाई र स्तनको मुण्टो निक्कै सप्रेको निबुवा जस्तो ठुलो ठुलो भएको । म उत्तानो परेर बिछ्यौनामा मडारिईरहेकि थिएं । मडारिने क्रममा तलबाट म्याक्सी सुर्किईएर पेट सम्म आएको थियो । म अर्को हातले भने बाक्लिएर कालो हुंदै जाने क्रममा भएका रहर लाग्दा योनिक्षेत्रका रौंहरु मुसार्दै थिएं । वाताबरणमा भएको गर्मी र मेरो रंगीन कल्पनाले उमारेको जोसको संमिश्रणले गर्दा मलाई मेरो योनि भित्रबाट ज्वालामुखी विष्फोटन भएर लाभाहरु छरिन्छ कि जस्तै लाग्दैथियो । विष्फोटनकै संकेत स्वरुप मेरो योनिको मुखभागबाट निस्किएको चिल्लो चिप्लो पदार्थ मेरो हातले स्पर्स गर्दै थिय। त्यतिकै मा ढोका बाहिर बाट त्यो केटा दिदि भन्दै बोलाउन थाल्यो। म थोरै सम्हालियर बाहिर निक्ले र सोधे किन आज १२ बजे नै स्कुल बाट फर्केको? आज स्कुलमा हड्ताल छ भयेर चाडै नै आउनु परेको कुरा सुनायो।। मेरो जवानि को जोस अझ नि कम भको थियेन त्यो केटा लाई मित्र लगेर फटा फट म सङग चिकाई हलु जस्तो लग्दै थियो। तर फेरि केटा लाई थाहा छ कि छैन , फेरि के भन्ने हो भनेर मैले तुरुन्त केहि भन्न अनि गर्न पनि सकिन। मैले भने उस्लाई जा फ्रेस भयेर आइज सङै फिल्म हेर्नु पर्छ। उ ५ मिनट म नै नुहायेर आयो। हल्फ पाईन्ट र टिसर्ट लगायर आयेको रहेछ। हामि डुबै मेरो ओछ्यान मा पल्टेउ। मैले ल्यापटप चोलेर सिधै ब्लु फिल्म लगाये र सोधे कहिले यस्तो गरेको छ भन्दै त्यो केटा लाई सोधे? उस्ले नाई भन्दै हेर्न थल्यो। ब्लु फिल्म मा पुति चाटेको लाडो चुसेको अनि बिस्तारै चिक्न थालेको सिन हेर्दा सम्म मैले खप्न नै सकिन र फिल्म बन्द गर्दै उसलाई जबर्जस्ति मैले भने त लाई पनि गर्न मन् छ उस्ले पहिला त नाई भन्दै थियो मैले नै उस्को हाल्फ पाईन्ट खोलेर सुताउदै उस्को सानो भाई खेलाउन थाले। उस्लाई पहिला त धेरै काउकुति लागेको रहेछ बिस्तारै उ मजा लिन थाले जस्तो गर्न थल्यो। केहि बेर पछि उस्को सानि तुरि पनि ठन्केर ७ इन्चि जति लामो भयो। उस्को लाडो को टुप्पो को छाला पनि फर्केको रहेन छ मैले बिस्तारै फर्काई दिय। उस्लाई झन धेरै काउकुति तथा थोरै दुख्दै रहेछ। मैले केहि हुदैन भनेर उस्को लाडो चुस्न थाले। उ अझ उफृन थाल्यो। मैले निकै बेर चुसे पछि उस्लाई सबै कुराको मजा आउन थलेको थियो भने मलैई भने खपि नसक्नु भयेको थियो। अब तेरो पालि भनेर म मेरो प्यन्टि फुकल्दै उस्को टाउको समातेर मेरो पुति तिर लगाउन थाले। पहिला त के गर्ने भन्दै थियो मैले भने फिल्म मा जस्तै चाट न भने उस्ले पहिला त घिन मने जस्त गरि चट्दै थियो तर पछि त मजाले ल्याप ल्याप चाट्न थाल्यो। केहि बेर चाटे पछि मैले नै उस्को लाडो चुस्न थाले र मेरो दुध माड्न लगाये। यो कर्म केहि बेर् चले पछि मैले नै उस्लाई चिक्न भने उस्को लाडो डन्डा जस्तो खडा भयेको थियो । उ म मथि चढ्यो। उस्ले आफै मेरो पुतिमा लाडो घुसाउन नै सकेन।
कहिले दाया कहिले बाया यस्तै यता उता उस्को लाडो चिप्लि रह्यो। आखिर मा मैले नै १ हात ले उस्को लाडो समति दोश्रो हातले पुतिको मुख फैलायेर पुतिको मुख मा लाडो राखे। अनि उसलाई बल गरेर धकल्न लगाये। उस्ले पनि बल लगयेर धक्का दियो। बल्ल्ल पुतिमा लाडो पस्यो। खुब् मजा आयो। पैला त उस्ले लाडो पुति भित्र नै रखि रह्यो नि १ -२ मिनेट पछि मैले नै भने आगडि पछडि गर्न भनेर। उस्को लाडोको टुप्पो मा धेरै काउकुति लागेको र तातो भयेको कुरा गर्दै थियो उस्ले। मैले जे भये पनि आफै ले पनि तल बाट भये पनि पुति तल माथि गर्दै थिये। करिब आधा घन्टा चिके पछि मेरो माल झरेको जस्तो भयो।
तर त्यो केटाको केहि पनि भयेको थियेन। मलाई त्यति बखत चिकन पुगेको ले उस्को लाडो मेरो पुति बाट झिकिदिय तर बिचरा को लाडो यक्दम थन्केको थन्केइ थियो। मैले उस्को लाडो केहिबेर चुसे तर पनि केहि झरेन । उस्ले भन्दै थियो कि उस्को लाडो फुट्ला जस्तो रन्केको छ। मैले सम्झे यो केटाले आज सम्म आफ्नो माल झारेको रैनछ। यक पटक पनि बिर्य नझरेको वा यक पटक पनि हस्थ मैथुन नगरेको केटा हरुको लाडो खालि ठन्केको ठन्कै गर्ने रहेछ। मलाई समस्या पर्यो अब यसको लाडो कसरि सुताउने? मैले आइडिया निकाले उस्लाई चिसो पानि ले नुहाई दिय। बल्ल त्यसको लाडो थन्कन छोड्यो। बिचरा लाई लाडो बाट फुसि झार्ने तरिका पनि थाहा रहेनछ। मैले पनि ब्लु फिल्म मा खलि चिकेको मात्रै देखायकि थिय। माल झारेको देखयेको थिईन। त्यो दिन मैले २ पटक शम्म त्यो केटालाई चिकया तर पनि केटाको माल झरेन। त्यस्तै ३-४ दिन मैले त्यो केटा लाई चिकाये। आफुलाई नपुगुन् जेल शम्म कहिले काहि त १ घन्ट्टा शम्म पनि चिके होला तर केटाको लाडो ठाडो को ठाडो नै भै रहन्थ्यो। चिसो पनि ले धोय पछि मात्रै उस्को लाडो सानो हुन्थ्यो। मैले १ दिन उस्लाई पुरा ब्लु फिल्म देखाई दिय। फिल्म मा चिकि सके पछि लाडो बाटा फुसिको पिचकरि निस्केको पनि देख्यो केटो ले। अब भने माल झार्न सिक्ला जस्तो लागेर मैले भने यस्तो माल आउन लाग्यो भने पुति बाट लाडो झिकि हल्नु पर्छ है। उस्ले हुन्छ भन्दै चिक्यो त्यो दिन पनि।
तर त्यो दिन पनि उस्ले माल झार्न सकेन। येस्तै हामि दिनमा ३-४ चोटि चिक्दा पनि उस्को माल झर्न सकेको थियेन। यसमा उस्ल्लैइ धेरै पिडा भयेको थियो भने मलाई धेरै मोज। किनकि उस्को लाडो जटि बेला पनि सार्हो नै हुन्थ्यो। १५ दिन पछि को कुरा हो त्यो दिन हमिले दोश्रो पटक चिक्दै थियोउ केटो पनि यक्सपर्ट भयेको थियो मस्त आधा घन्टा देखि चिक्दै थियो यक्कसि लाडो पुति बाट झिकेर हल्लाउन थल्यो।। ओहो पहिलो पटक को भर्जिन फुसि मेरो मुख भरि नै झरिदियो। मस्त बस्ना दार फुसि सङै मैले उस्को लडो पनि चुसि दिये । बल्ल उस्को लाडो आफै सिथिल भयो।
12:33 AM khabarexpress Nepal No comments
उनी मेरो गाउँ भन्दा अलिक तलको थिईन तर भैरहवामा बस्थीन कुनै बेङ्कमा काम गर्थिन।तर धेरै समय भएको थियो हाम्रो भेट नभएको।मैले उनलाई भेट्न आग्रह गरे हुन्छ भैरहवा आउनु लुम्बिनी घुम्न जाउला ।भोलि बिहान हतार हतार नुहाए उनको यादमा मेरो भाईलाई खेलाए साबुन लगाएर धोए अनि कपडा लगाएर बाईक निकाले एभेन्जर २२० दाजुले सोध्नु भयो काहा जाने मैले बुटवल प्रदशनी भने र बाइक लिएर कुदे। करीब ४० मिनेटमा भैरहवा पुगे उनले लुम्बिनी जाने बाटोमा छु आउनु भनीन,भेट भयो म त हेरेको हेरै भए। घुमारेको कपाल गोरो अनुहार मिलेको दन्त लहर उठेको छाती छिनेको कम्मर फुकेको हिप उफ म त काएलै भए र उनको अगाडि म आफैले आफैलाई नराम्रो सोचे मन मनै सोचे बन्दरको हातमा अङ्गुर ।
उनको नाम गुडिया काउचा उमेर करीब २३ बर्षको कुनै गुडिया र कुनै परी भन्दा कम देखिएको थिईनन ।टाईट कालो पाईन्ट र निलो सर्टमा सजिएको कुनै मोडेल भन्दा कम देखिएको थिईनन उनी ।मैले बाइक स्टार्ट गरे उनी पछाडी बसीन अलिक छुट्टीएर मलाई अफ्ट्यारो लाग्छ अलिक टासिएर बस भने।उनको तीखो बुबुको स्पर्श हुदा त स्वर्गीय आनन्द महसुस हुँदै थियो धेरै बर्ष अघि आएको हुदा बाटो बिराएछु। सोध्धै सोध्धै बल्ल बल्ल आई पुग्यौ लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्म स्थल निकै राम्रो लाग्यो पुजा दर्शन गरे पछि क माग्यौ भनेर सोधे धत मागेको कुरा पूरा भए आफै थाहा पाउनुहुन्छ मुस्कुराउदै भनीन,मैले भने हेर कालू उनलाई मैले माया गरेर कालू भनेर बोलाउथे,मेरो ढाट्ने बानी छैन मैले त भगवान सङ्ग तिमी मात्र तिमीलाई मागे सातै जुनी सम्म उनले झुटो भन्दै हासीन घुम्ने क्रम सकिएपछि एउटा रेस्टुरेन्टमा पस्यौ ।के खान्छौ हल्का पानी परेको छ कफि खाउ भनीन अनि खाजा ? पछि खाउला अलिक कुनाको टेबलमा बस्यौ ।मिनीरल र कफी आयो हामी गफ गर्दै कफी खादा मैले किस गर न भने हुनत अघि घुम्दा पनि किस गर भन्दा पछि गर्छु भनेको थिईन। कोही नभएको मौका परेर उनले मेरो गालामा च्वाप्प किस गरिन म हास्दै भने हामी २०१४मा छौ कहाँ यो पुरानो तरीका? हेर म सिकाउछु मैले ओठमा ओठ जोडे र चुस्न थाले अनि जिब्रो लडाए क्या सुगन्ध थियो उनको मुखमा छोड्नै मन लागेन पसले आए जस्तो भान भयो र हामी बिल पे गरेर निस्कीयौ । पानी परेको थियो हल्का हल्का रेईन मा रोमान्स क्या मज्जा हुन्छ है??उम केही बोलीनन बाईकको गति निकै कम गरेको थिए रात पारेर संगै सुत्नु पर्छ मेरो पलान । अचानक बाइक माटोमा चिप्लीएर लड्यो धन्न भगवान हामीलाई केही भएन तर अचानक बाइक माटोमा चिप्लीएर लड्यो धन्न भगवान हामीलाई केही भएन तर हिलै हिलो भयौ। भैरहवा पुग्ने बेलामा एउटा होटेल लिए। उनले मेरो हिलो लागेको पाईन्ट र ज्याकेट पखालिन अनि आफ्नो पाईन्ट र शर्ट खोलीन बाथरुममा गएको मलाई उनको जवानी र सुन्दरताले लट्ठै बनायो म बिस्तारै बाथरुममा छिरे र ढोका लक गरे क गरेको आबुई लाज छैन?? तेहि भङ्ग गर्न आएको भन्दै ओठमा ओठ जोडे ब्रा बाट बुबु निकाले हातले खेलाउन थाले अझै सारो रहेछ मुन्टो समतेर बुबु हल्लाए।
घाँटी कान चुम्दै चाट्दै बुबु चाटे बुबुको मुन्टो चुसे केही भनिन यसो पुतिमा हात लगेको घुडा च्यापेर धत हुन्न भनीन उनलाई बेड्मा बोकेर लगे र फेरि चुस्न चुम्न र चाट्न थाले बल्ल टाङ्ग फट्टाईन मेरो भोको प्यसी लाडो छिराउन हर प्रयात्न गरे अह छिरेन मैले चोरी औला दुलो मा छिराए उह गरीन र टिसी चुस्न चाट्न थाले एकछिनमा उनको पानी रसायो नुनिलो नुनिलो बास्नादार मैले त्यो निले अब छिर्छ होला भनेर मेरो लाडो उनको पुतीमा निशाना बनाए अह दुख्यो भन्दा पुरै छिराए दुख्यो के काले अईया भनीन कत्रो ठूलो कात्रो लामो मर्ने भए बिस्तारै काले दुख्यो नि मैले सुने नसुने झै गरि धक्का दिईरहए।एक छिन दुख्छ काली मलाई पनि दुखेको छ टाईट भएर भन्दै चिकीरहे करीब १५ मिनेटमा आफ्नो लाडो समतेर उनको नाईटोमा मेरो भाईले नैनी फाल्यो एस्तो माल फेरि पाइन्छ पाईन्न सोछे र उनलाई मेरो माथी चडाएर जिब्रो लडाउन थाले भाइ फुल्यो र उनी माथी म तल चिकी रहे
12:32 AM khabarexpress Nepal No comments
गाउमा एकजना मामा मामा भनेर बोलाउने को भाईको बिहेमा गएको थिए निक्कै रमझम थियो अनी जाडो पनि निक्कै थियो झन्डै हल्का मदिरा सेवन गरेर नगएको भए त खत्तमै हुने रहेछ जाडोले । बिहे घरमा पुग्दा मादल र ठिट्टा तरुनिहरु को दोहोरी भकामा माया प्रिती को गीत चल्दै रहेछ हामी दुईजना गएका थियौ दुबै जना केटीहरुको बिचमा गएर ताली बजाउदै उनिहरुको दोहोरिमा साथ दिदै हल्का स्वर मा स्वर मिलाउदै केटीहरुको माझमा गएर बस्यौ । निक्कै रमाइलो भएको थियो नाच्ने हरु स्या स्या हुँदै पनि अबिरल नाचिनै रहेका थिए शायद रक्सी को नशा ले जोश दिएको हुन सक्छ । केही छिनमा मैले थाहा पाए कुनै एउटी मदमस्त जवानी ले मातिएकी पर्फ्युम को तिखो बासना मग मग बसाउदै निक्कै प्यासी नजर चारैतिर फैलाउदै ठीक मेरो पछाडि आएर बसिन ।
अब भने मलाई पनि कता कता मनमा काउकुती लागे जस्तो भयो कसरी त्यो आईमाईको समिप टासिन पुगु ,कसरी उनिसङ्ग बोलु !! तर मेरो मनको सबै कुरा भगवानले सुनेछन क्यारे त्यो आईमाई नै म सङ्ग बोल्न पुगिन पहिलो प्रश्न थियो अरे मेरो नाम लिएर …. तिमी कती बेला आएको नि ? म एकछिन त जिल्ल परे अनी पछाडि फर्केर हेरेको त जुन मुख ले मामा भनेर बोलाउने गर्दथे वहाँकै बुढी पो रहेछ । वहाँकै देवरको बिहे हुँदै थियो त्यहा । तर आज मैले अर्कै देख्दै थिए त्यो मुखौली माईजुलाई शायद मेरो मनमा वहाँ प्रती अर्कै भाव पलाएर हुन सक्छ शायद मैले पहिला हेर्ने नजर र अहिले जुन नजरले हेर्दै थिए त्यस्मा भिन्नता भएर हुन सक्छ । कस्तो माइजुपनी म सँग नै टासिन आउनु भयो २ बच्चा कि आमा भएर पनि वहाँ को त्यो बुबु को तिखोपना भने कायम नै रहेछ मलाई मेरो ढाढ मा घोचे जस्तो भयो अनी किन किन मेरो सानो यन्त्र बढ्दै बढ्दै जुरमुराउन थाल्यो …. शायद त्यो माईजुको पनि धैर्यता को बाध टुटेछ क्यारे …!! आउन सल ओढ्नु भनेर तान्नु भयो जाडो थियो अनी गाउ घरको ठाउँ उज्यालो बत्ती पनि थिएन तर पनि चन्द्रमा को प्रकाशले शहरीया Tubelight लाई Challange गरेको थियो फेरी पनि हामी घर को पिढिमा भएको हुनाले प्रकाश देखी ओझेल मा नै थियौ । सल भित्र नै मुख्यौली माईजुले आफ्नु हात मेरो रन्की रहेको त्यो ठाउमा खेलाउन थाल्नु भयो अब भने मलाई खपी नसक्नु भयो … वहाँले त मेरो त्यो यन्त्र लाई भाचुला झै गरी निकै बटार्नु भयो त उफ्फ त्यत्ती मात्रा कहाँ होर यन्त्र माथिको मेरो चारकोशे झाडी पनि पुरै उखाल्ने मुड मा थीइन के गरु के गरु भयो वहाँको हिमालचुली बुबु मैले ब्लाउज भित्र हात छिराएर बुबुको मुन्टो मज्जाले खेलाउन थाले …कस्तो अचम्म वहाँले मेरो हात समाएर आफ्नु गहिरो त्यो कुवामा पो छिराइदिनु भयो ….झन त्यो कुवाको तातो तातो पानी अनी पानी को वाफले मैले म अनियन्त्रित भएको महसुश गरे सो एकैछिन है माइजु भनेर उठ्नु कर लाग्यो मलाई । वहाँले कहाँ जाने भनेर नसोधेको पनि हैन मलाई सुसु गरेर आउछु भनेको शायद मेरो मन को कुर बुझ्नु भएछ कि के हो मुसुक्क हास्नु भयो । म त्यहा बाट उठेर सरासर बिहेको भान्छा तिर लामो लामो कदम बढाउन थाले त्यहा गएको वहाँ कै श्रीमान जसलाई म मुखले मामा साईनो गरेर बोलाउथे वहाँहरु मज्जाले गीत गाउदै सुङ्गुरको मासु सङ्ग रक्सी को ग्यालिन नै ठाडो घाटी लगाउदै रहेछन मलाई देख्न साथ आफुहरु को साथमा बोलाएर पिउने आग्रह गर्न थाले पिउनमा म पनि कहाँ कम्ती थिए र मज्जाले पिउन थाले अनी झनै म मा कामाग्नी बढेको पाए त्यहा बाट पनि बिदा लिएर म फेरी सुसु जाने भनेर पछाडि अन्ध्यारो कुना तिर लागे । अनी सुसु सङ्गै मैले आँफैले खेलाएर आफ्नु बिर्य स्खलन गरे अब भने अलिक हल्का भएको भान भयो मलाई फेरी म सरासर उही माईजु भएको ठाउमा गए र फेरी त्यही प्रकृया दोहोराउदै बसे रात निकै छिप्पी सकेको थियो सबै सुत्ने तरखर मा थिए । त्यही पिढिमा सुत्ने चाजो पाजो मिलाउदै थिए कोही भने कोही खोपिमा र बिहे घर भित्र छिर्दै थिए अब भने मैले माइजुलाई भने हामी कहाँ सुत्ने ? सबै त सुत्न थालिसके माइजुले मुसुक्क हाँस्दै त्याह सुत्न जानेनी हामी भनेर शायद गाई भैंसी बाध्ने गोठ थियो त्यता तिर ईशारा गर्नुभयो ।
मैले पनि हुन्छ भनेर टाउको हल्लाए एकैछिन है भनेर वहाँ बिहे घर भित्र छिर्नु भयो अनी वहाँ बाहिर आउँदा हातमा एउटा सिरानी र ब्ल्यान्केट लिएर आउनु भयो अनी मलाई एउटा टर्च लाईट दिएर जादै गर्नु भन्ने सन्केत दिएर फेरी भित्र पस्नु भयो । अनी म सरासर त्यो गोठमा गए त्यहा गाई भैंसी त केही थिएन तर कुनामा टन्नै पराल राखिएको रहेछ त्यही परालमा त सुत्ने होला नि भन्ने लाग्यो अनी गएर सिरानी हाली ब्ल्यान्केट ओढेर सुते । निकै बेर प्रतिक्षा गरे मैले त्यो माइजुको तर आउनु भएन मलाई लाग्यो आज जे भयो शायद त्यत्ती मा सिमित होला आज मैले माइजुको त्यो गहिरो कुवामा डुबुल्की मार्ने रहर केवल रहरमा सिमित राखेर निदाउने प्रयासमा लागे । त्यस्तै डेढ घण्टा पछी वहाँ आउनु भयो र निकै हतार मा देखिनु हुन्थ्यो आउन साथ मलाई आफ्नु माथि तान्नु भयो आफ्नु साडी माथि फर्काइ हाल्नु भयो भित्र कट्टु लगाउनु भएको थिएन सो छिटो छिटो गर भनेर मेरो पाईन्ट खोलिदिनु भयो मैले पनि वहाँको कुरा मानेर सिधा मेरो त्यो रन्किएको यन्त्र छिराइ हाले अनी त म मज्जाले उफ्रिन थाले माइजु ले आफ्नु दुबै खुट्टाले मलाई च्यापेर तल बाट पनि निक्कै उफ्रिनु भयो । चन्द्रमा को मधुर प्रकाशमा वहाँको सेतो साप्रा मुसार्दै मैले उफ्रिनु सम्म उफ्रिए निकै बेर सम्म युद्द जारी रह्यो किन कि मैले एक त पहिले हस्त मैथुन गरेर नै फाली सकेको थिए शायद त्यसैले होला माइजु र मेरो भिडन्त निकै बेर सम्म चल्यो त्यसै क्रम मा माइजुले मेरो ओठ निकै मज्जाले टोकिपनी दिनु भएको थियो तर मलाई दुखेको थिएन केही छिनको हाम्रो यो हाम्रो माहा सङ्ग्राम सिथिल बन्न पुग्यो जब मेरो पहाड छेड्ने जस्तो गरी निस्किएको त्यो बेगदार बिर्य ले माइजुको त्यो गहिरो कुवा भरिने गरी निस्किन थालेको थियो । त्यत्ती बेला मैले प्रष्ट देखेको थिए माइजु हल्का लजाएर दुनियाँ सङ्ग बेखबर मेरो यन्त्र बाट निस्केको बिर्यलाई आफ्नु गहिरो कुवामा धेरै गहिराइ सम्म पुर्याउने कोशिसमा आफ्नु कम्मर मुनी को भागलाई हल्का दाँया बाँया हल्लाउदै थीइन । एकैछिनको त्यो कृयापछी वहाँ उठेर आफ्नु साडी र ब्लाउज मिलाएर पहिलाको स्थितिमा आउनु भयो अनी जान्छु भन्ने ईशारा दिएर माथि लाग्नु भयो
12:25 AM khabarexpress Nepal No comments
अश्लील फिल्म हेरेपछि मलाई आफ्नो शारीरिक बनावट, पुरुषसँगको सम्बन्धप्रति नयाँ धारणा जागृत भयो । राति सुत्दा ओछ्यानमा म आफ्नो स्तन खेलाउने, पुती मुसार्ने, तिग्रामा सिरानी चेप्ने, घोप्टो परेर पुतीलाई ओछ्यानमा रगड्ने जस्ता काम गर्दथेँ । यसबाट मलाई केही आनन्दको अनूभू्ति हुँन्थ्यो ।यसो गर्दागर्दै मलाई सेक्स गर्ने इच्छा जाग्यो तर कोसँग गर्ने भन्नेमा समस्या देखेँ । किनकी त्यतिन्जेल म कुनै पुरुषसँग नजिकिएकी थिइनँ । विनोद अंकलले बीरगंजमा मप्रति गरेको कृयाकलापले मलाई पुरुष जातिसँग टाढा बनाइसकेको थियो । तर अब म पुरुषसँग नजिक हुन चाहन्थेँ ।यस्तैमा मेरो ध्यान हाम्रै छिमेकी श्रीराममा केन्द्रीत भयो । श्रीराम म भन्दा ४ वर्ष जेठो थियो । उसले मलाई काली भनेर जिस्क्याउने गर्थ्यो । तर म भने त्यति वास्ता गर्दैनथेँ ।एक दिन मैले उसलाई जिस्क्याएँ । ‘हिरो बनेर कता नि ? केटी भेट्न कि क्या हो ?’ बाटोमा एक्लै हिडिरहेको बेला मैले उसलाई भनेँ । कहिल्यै यसरी नबोल्ने मान्छेले त्यस्तो कुरा सोधेकाले होला, ऊ चकित भयो र भन्यो, ‘लौन हामीसँग पनि बोल्न मिल्दो पो रहेछ, के को केटी भेट्न जानु नि ? छेउमै भएकी तिमीले त पत्याउँदिनौं ।”पत्याएरै त सोधेको नि,’ मैले पनि तुरुन्तै जवाफ फर्काएँ । ऊ हाँस्दै आफ्नो बाटो लाग्यो । म पनि आफ्नै बाटो लागेँ । मनमनै मलाई कुत्कुती लागेको थियो । कुनै पुरुषसँग यसरी पहिलो पटक संवाद गर्दा पनि कुत्कुती लाग्दो रहेछ ।आफ्नो कोठामा बसेर श्रीरामसँग अंकमाल गरेको कल्पना गर्न थालेँ । मलाई झन आनन्द लाग्यो । ऊसँग बसेर धेरै बेर कुरा गर्ने इच्छा मेरो मनमा पलाउँदै गएको थियो तर त्यस्तो मौका नै मिलिरहेको थिएन ।एक दिन श्रीराम हाम्रो घरमा तरकारी माग्न आयो । उसको बुवा ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो । बुवा ट्रक लिएर कतै जानु भएको रहेछ, आमा भने बहिनीलाई लिएर मावल जानु भएकाले घरमा एक्लै खाना पकाउन अल्छी लागेर तरकारी माग्न आएको बेलिबिस्तार उसले सुनायो । अनी हाम्रो ममीले उसलाई सोध्नु भयो, ‘तरकारी मात्र लगेर केसित खान्छस् त ?’ उसले भन्यो- चिउरा छ नि ।ममीले हाम्रो घरमा खाना खान उसलाई आग्रह गर्नुभयो तर उसले मानेन । बोडीको तरकारी एउटा कचौरामा लिएर ऊ आफ्नो घर गयो । केही बेरपछि म पनि आफ्नो घरबाट लस्किदैं रोडमा निस्किएँ । म उसको घरमा जाने दाउ हेरेर बसिरहेकी थिएँ । किनकी गाउँघरमा कुरा काट्नेहरु धेरै हुन्छन् ।दिउँसो मेरो योजना सफल हुन सकेन । तर साँझ पख भने म उसको घरमा पुगेरै छाडेँ । आखिर लोडसेडिङले सबैतिर अँध्यारो भएको थियो । ‘ओ हिरो दाई, के गरेर बसेको ?’ उसलाई देख्नासाथ मैले सोधेँ । ‘के हुनु नि, चाउचाउ पकाउन थालेको, के कामले आयौ ?’ उसले प्रत्रि्रश्न गर्‍यो । ‘काम नभई यहाँ आउनै हुँदैन कि क्या हो ?’ मैले पनि प्रश्नबाटै जवाफ दिएँ । ‘कहिल्यै नआउने मान्छे अचानक आउँदा अचम्म लागेर सोधेको नि,’ उसले कुरा अघि बढायो ।चुलोबाट उसले चाउचाउ निकाल्यो । ‘खाने हो ?’ उसले मतिर हेर्दै सोध्यो । ‘चाखौं न त,’ ऊसँग नजिक हुने मौकाको प्रतिक्षामा मैले भनेँ ।एउटा कचौरामा मलाई चाउचाउ दिदैं ऊ पनि अर्को कचौरामा लिएर खान बस्यो । चाउचाउ खाइसकेपछि केहीबेर हाम्रो सम्बाद बन्द भयो । के कुरा गर्ने भन्नेमा म अन्यौलमा थिएँ, सायद ऊ पनि त्यस्तै अन्यौलमा थियो ।ऊ कचौरा उठाउँदै थियो । मौका छोपेर मैले उसको लाडो भएनिर हात पुर्‍याएर भने, ‘म उठाइ हाल्छु नि ।’ तर मेरा हातले उसको लाडो भेटेन क्यार, मैले केही पत्तो नै पाइनँ । ऊ झसङ्ग भएको थियो । तर केही भनेन । सिर्फमेरो अनुहार आर्श्चर्यजनक रुपमा हेरिरहृयो । ‘के हेरेको नि,’ मैले परिस्थितीलाई अन्यत्र मोड्ने कोसिसका साथ भनेँ ।’तिमी पनि हुर्किछौं भनेर हेरेको नि,’ उसले भन्यो । ‘किन र ?,’ मैले सोधेँ । ‘केही हैन, भइ गो,’ उसले छोटो जवाफ दियो । म कुरा अघि बढाउन चाहन्थेँ । अनि आँट गरेरै मैले सोधेँ, ‘मैले त्यहाँ हात लगेकाले त्यसो भनेको हो ?’ उसले केही जवाफ दिएन । केही बेरको मौनतापछि मैले फेरि आफ्नो हातले उसको लाडो बाहिर बिस्तारै हिर्काउँदै भने, ‘लु त, अब झन् हुर्किएँ हैन त ?’ अचानक ऊ जोशमा आयो र उसले पनि मेरो पुतीमा हात ल्याउँदै भन्यो, ‘तिमी भन्दा दुइचार वटा भोटो बढी नै फटाएको छु, खायौ ?’ उसले भन्यो । मलाई निकै आनन्द लागिरहेको थियो । उसले अझ बढी यसरी नै मलाई चलाइरहोस् भन्ने मेरो मनमा थियो । अनि मैले च्याप्प उसको लाडो समातिदिएँ । तर अहिले त उसको लाडो निकै ठूलो पो भइसकेको रहेछ । ‘लौ, अघिसम्म त केही नभएजस्तो थियो, अहिले त यत्रो ठूलो भइसकेछ, के भाको ?’ मैले छक्क मान्दै साधेँ । ‘सँधै यत्रै ठूलो भइरहे त यसलाई कसरी तह लगाउनु नि ?’ उसले भन्यो । उसले भनेको कुरा मैले बुझिनँ । अनि उसलाई सोधेँ, ‘किन र ? यो ठूलो हुँदा के हुन्छ ?”के थाहा नपाएजस्तो गरेकी ? यो ठूलो भएपछि यसलाई शान्त पार्न केटी चाहिन्छ क्या ।’ उसले भन्यो । ‘ए.. त्यस्तो पो ।’ मैले बल्ल बुझेँ । अनि महसुस गरेँ, अब उसलाई पनि केटी चाहिएको छ । मुख खोलेरै भनेँ, ‘त्यसो भए अहिले यसलाई केटी चाहिएको हो त ?’ अनि उसले पनि जिस्किदैं जवाफ थियो, ‘किन र ? तिमी मान्छ्यौं ?”के गर्न ?’ अलिअलि बुझे पनि मैले नबुझेजसरी सोधेँ । ‘पहिला मान्छु त भन न, के गर्ने भन्ने कुरामा त म छँदैछु नि ।’ उसले भन्यो । ‘भन्दै नभनिकन मैले के मान्नु नि ? के गर्न भन्नु न त ?’ उसले आफ्नो लाडोतिर संकेत गर्दै स्पष्टसँगै भन्यो, ‘यसलाई त्यहाँ छिराउन, हुन्छ ?’बल्ल कुरा सही मोडमा पुगेको थियो । तै पनि ऊबाट अझ प्रष्ट कुरा सुन्ने उद्देश्यले मैले सोधेँ, ‘त्यसलाई यहाँ छिराउँदा के हुन्छ ?’ उसले भन्यो, ‘त्यो त छिराइसकेपछि तिमीले पनि थाहा पाइहाल्छौं नि ।’मैले केही नबोली उसको लाडोमा पुनः आफ्नो हात पुर्‍याएँ । बेलाबेलामा तनक्क तन्किएको जस्तो लाग्यो । अनि उसले पनि केही नबोली आफ्ना हातले मेरो स्तन माड्न थाल्यो । मैले पनि बल लगाएरै उसको लाडोलाई च्याप्प समातेँ । उसले मेरा स्तनलाई बेस्सरी निमोठ्यो । ‘ऐया, दुख्यो । कस्तो माया नगरी निमोठेको ?’ मैले भनेँ । प्रत्युत्तरमा उसले भन्यो, ‘तिमीले चाही मेरो डन्ठालाई माया गरेर समातेकी छौ र ?’हामी यसरी नै एक अर्काका अंग खेलाउन थाल्यौं । यो मेरो जीवनमा नौलो अनुभव थियो । मलाई मज्जा लागिरहेको थियो । अनि उसले मेरो भेस्ट खोल्यो । क्रमशः मेरो समिज र स्कर्ट हुँदै पेन्टीसम्म खोल्यो । कुनै पुरुषसँग नाङ्गिएको यो मेरो दोस्रो अनुभव भएपनि पहिलो पटकको तुलनामा अहिले मलाई निकै आनन्द लागिरहेको थियो । अनि अब के होला भन्ने कौतुहलता पनि जाग्दै थियो ।’अरु केटीसँग पनि यस्तो काम गरेको छ ?’ मैले संवादलाई अघि बढाए । उसले भन्यो, ‘तीन पटक यस्तो काम गरेको छु ।’ मैले सोधेँ, ‘कोसँग ?’ दुइ पटक यही गाउँको एउटा केटीसँग अनि एक पटक चाँही जनकपुरमा ।’ मैले हाम्रो गाउँको को केटीसँग यस्तो काम गरेको भनेर सोधेँ । तर उसले नाम भनेन । ‘तिमीसँग गरेको कुरा पनि मैले अरुलाई भन्नु हुँदैन, अरुसँग गरेको पनि तिमीसँग भन्न मिल्दैन,’ उसले यसरी नै मेरो प्रश्नलाई टार्‍यो । अनि उसले मलाई खाटमा नाङ्गो पारेर सुतायो । त्यसपछि उसले आफ्नो लुगा धमाधम खोल्यो । ऊ पनि नाङ्गो भयो । ‘तिमीले चाँही यस्तो काम पहिला गरेकी छौं ?’ उसले सोध्यो । ‘छैन, कहाँ गर्नु नि ?’ मैले जवाफ फर्काएँ ।उसले मेरो स्तन मुखमा च्याप्यो । स्तनको मुन्टो आफ्नो ओठले चेपेर खेलायो । बेलाबेलामा स्तन चुस्ने गर्थ्यो । मेरो शरीर काम्न थालिसकेको थियो । उसले मलाई बेस्सरी च्याप्दै स्तन चुस्न थाल्यो । मलाई काउकुती र छट्पटी भइरहेको थियो । म उसको टाउको सुम्सुम्याउँदै आनन्द लिइरहेकी थियो । कुनै कुनै बेला उसले चुस्दा मेरो दुध दुखेजस्तो हुन्थ्यो । आफ्नो हातले मेरा दुध खुब खेलायो । अनि ढ्याप्प मेरो उत्तानो शरीरमाथि आफू घोप्टियो । उसको लाडोको स्पर्श मैले स्पष्टै थाहा पाइरहेकी थिएँ ।मैले उसलाई अँगालोमा बाँधे । उसले पनि मलाई अँगालोमा कस्यो । हामीले खुब बल लगाएर एक अर्कालाई कस्यौं । यसो गर्दा मैले खुब आनन्द पाएँ । केही बेरपछि उसले आफ्नो कम्मर उठायो र लाडोलाई मेरो पुतीमा रगड्न थाल्यो । बाहिरपट्टी उसले निकै बेर रगड्यो । हनि हातले सुम्सुम्यायो । पुतीको मुखमा औंलालाई खेलाउन थाल्यो । म तरङ्गीत भएँ । मैले पनि आफ्नो हातलाई पुतीमा पुर्‍याएँ । त्यहाँ रसिलो भइसकेको रहेछ । ‘छ्या’ भन्दै मैले हात ओछ्यानमा पुछेँ । उसले घिन नमानीकन खेलाइरह्यो । अनि औंला पसाउन थाल्यो । आफ्नो माझी औंला पसाउँदै निकाल्दै गरिरह्यो ।’कस्तो लागेको छ ?’ उसले सोध्यो । ‘मज्जा आइरहेको छ ।’ मैले जवाफ दिएँ । ‘अब काम सुरु गरौं है ?’ उसले भन्यो । ‘अझ काम सुरु भएकै छैन ?’ मैले भनेँ । ‘यसलाई खै र छिराएको ? मुख्य काम त बाँकी नै छ ।’ उसले भन्यो ।मेरो पुतीको मुखमा लाडोको टुप्पो रगड्दै उसले भित्र पसाउन सुरु गर्‍यो । सुरुमा त निकै आनन्द आएको थियो तर भित्र पस्न थालेपछि मलाई दुख्यो । मैले सोचेँ, ‘मेरो पुतीमा कुनै पनि लाडो छिर्न सक्दैन ।’ किनकी पहिला पनि विनोद अंकलले पसाउन नसकेर नै छोड्नु भएको थियो ।’केही हुँदैन, एकैछिनमात्र दुख्छ,’ उसले मलाई सान्त्वना दिइरहेको थियो । उसले केही बेर आफ्नो लाडोको टुप्पोमात्र पसाएर राखिरह्यो । अनि फेरि निकाल्यो । मेरा स्तन खेलाउँदै उसले फेरि लाडोलाई पुतीको मुखमा सोझ्यायो । ऊ निकै जोसिएको थियो । यस पटक उसमा दयाको कुनै संकेत मैले देखेकी थिइनँ । ऊ कठोर देखिन्थ्यो । मलाई डर लाग्यो र भनेँ, ‘भइ गो छोड्नुस्, म जान्छु ।’ उसले मलाई झन कस्यो र भन्यो, ‘एकछिन पख है त, आँखा चिम्म गर । केही हुँदैन ।’ उसको शरीर निकै कसिएको थियो । मलाई जोडले समात्यो र लाडो ठेल्न थाल्यो । मैले आफ्नो पुतीमा उसको लाडो पस्ने कुनै छेकछन्दै देखेकी थिइनँ, लाग्थ्यो अब योभन्दा भित्र पस्ने रत्तिभर ठाउँ छैन । तर उसले हार मानेको थिएन । मलाई असह्य पीडा भइरहेको थियो । पुती च्यातिन्छ नै जस्तो लाग्न थाल्यो । तर उसले लगातार लाडोलाई भित्र बाहिर गरिरहेको थियो । मेरो मुखबाट ‘ऐया..ऐया’ निस्किरहेको थियो । तर मेरा पीडा उसले सुनिरहेकै थिएन । ऊ आफ्नै धुनमा व्यस्त थियो । उसले झन बल गर्‍यो । आधाभन्दा बढी लाडो उसले भित्र पसाइसकेको थियो । एकछिन त्यत्तिकै राखेर उसले पनि आफ्नो लाडोको हविगत हेर्‍यो । ‘भयो क्या, धेरै दुख्न थाल्यो…’ मैले भनेँ । ‘पख न कत्ति आत्तिएकी ?’ उसले मेरो आग्रह टार्‍यो । यत्रो पीडा खेप्नका लागि व्यर्थै आइछु जस्तो पनि लाग्यो ।उसले मलाई अँगालोमा फेरि बेस्सरी बाँध्यो र बल लगाउन थाल्यो । आफ्नो कम्मरलाई केही माथि तानेर उसले लाडोको टुप्पोमात्र पुतीभित्र राखेको थियो । अनि जोडले भित्र ठेल्यो । मलाई साह्रै दुख्यो र चिच्याएँ, ‘ऐया ममी, म मरेँ ।’ ऊ केही बेर शान्त भयो, यसो पुतीतिर हेरेको त करिब एक इन्चजतिमात्र बाहिर रहने गरी उसको लाडो पसिसकेछ । पोल्ने र दुख्ने पीडाले एकसाथ म छट्पटाएकी थिएँ । यत्तिकैमा उसले अलिकति बाहिर तानेर फेरि लाडोलाई धसायो । यतिबेला भने उसको पुरै लाडो मेरो पुतीभित्र छिरेको थियो । जमिनमा किला ठोकेको भन्दा कम थिएन होला उसको लाडो मेरो पुतीभित्र । अनि बिस्तारै उसले बाहिरभित्र गरी धक्का दिइरहेको थियो । ‘ऐया, भयो… अब त छोड्नुस्… ।’ दुखाइ सहन नसकी म अलाप गर्दै थिए । तर उसले किन छोड्थ्यो र ? उ त झन मच्चिन पो थाल्यो । आफ्नो पीडा सहेर बस्नुबाहेक मसँग कुनै बिकल्प नै थिएन । केही बेर पछि उसले लाडोलाई जोडदार धक्काका साथ भित्रै ठेल्यो । सायद अघिको तुलनामा अहिले उसको लाडो झनै भित्रसम्म पुगेको थियो । अनि केही बेरमै लाडो छट्पटाएको जस्तो अनुभव मैले गरेँ ।’आह..’ गर्दै उसले आफ्नो लाडोलाई केही बेर भित्रै राख्यो । अनि मेरो शरीरमाथि लम्पसार परेर सुत्यो । मानौं अघिको उफ्राइले ऊ निकै थाकेको छ । मैले उसलाई पल्टाउने कोसिस गरेँ । उसको पनि मन अघाएछ क्यार । यसपटक उसले आफ्नो शरीर ममाथिबाट हटायो । अनि चुपचाप कपडा लगाएर म उसको घरबाट बाहिर निस्किएँ । पुतीभित्र कतै दुखिरहेको थियो । हिड्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो । जसो तसो घरमा पुगेँ र आफ्नो ओछ्यानमा गएर पल्टिएँ । बेलुका केही खान मन लागेन ।भोलिपल्ट बिहान ट्वाइलेट गएको त पिसाबबाट रगत आएजस्तो देखेँ । मलाई निकै डर लाग्यो । दुख्न पनि छोडेको थिएन । हिड्दा खुट्टा फट्याउनु परेको थियो । ओछ्यान मै गएर फेरि पल्टिएँ । डरले सताइरहेको थियो । घरमा कसैले सोधे भने के भयो भन्नु ? दिनभरी टाउको दुखेको भनेर सुतिरहेँ । बेलुका थोरै खाना खाएँ । ममीले मेरो हिडाइँबाट चाल पाउनु भएछ क्यार सोध्नुभयो, ‘के भयो तलाई ? खुट्टा किन फट्याएर हिडेकी -’ मैले केही होइन, पिलो आएको छ भनेर टारेँ । दुइ तीन दिन पछि दुखाइ कम हुँदै गयो । पहिलो पटक मैले कुनै पुरुषको यौन शक्तिको सामना गरिसकेकी थिएँ । त्यो अनुभव हासिल गरेको केही दिन त आफू थलिएको जस्तै भएकी थिएँ । झण्डै एक महिनासम्म मलाई पुनः यौन सम्पर्क राख्ने कुरा सोच्ने आँट नै आएन । किनकी त्यो काम कति दुःखद थियो भन्ने कुरा मैले भर्खरै जस्तो भोगेकी थिएँ ।दिन बित्दै गयो । एक दिन हाम्रो घरमा फेरि विनोद अंकल आउनु भएको थियो । उहाँले हाम्रै घरमा खाना खानुभयो । ‘के छ कबिता ?’ उहाँले मसँग कुराकानीको सुरुवात यही प्रश्नबाट गर्नु भएको थियो । ‘ठिकै छ,’ मैले जवाफ दिएँ । कुरा गर्दा गर्दै उहाँलाई मैले सोधेँ, ‘बीरगंज जाने काम छैन अंकल ?’ उहाँले आर्श्चर्य मान्दै सोध्नुभयो, ‘किन र ? के काम छ ?’मैले कम्यूटर कोर्सका लागि बुझ्न जानु थियो भनेर उहाँलाई अर्थ्याएँ । उहाँले जाने भए जाउँ न त भनेर कुरा अघि बढाउनु भयो । केही बेरमा हामी परिवारकै सल्लाहमा बीरगंज गयौं । बाटोमा मैले मनमा अनेकौं कुरा खेलाएँ । बीरगंज पुगेपछि केही ठाउँमा गएर कम्प्युटर कोर्सका बारेमा बुझ्यौं पनि । तर मेरो उद्देश्य त्यो थिएन । अनि आफैंले भने, ‘कस्तो गर्मी.. नुहाउन पाए पनि हुन्थ्यो ।’सायद बिनोद अंकलले मेरो कुरा चाँडै बुझ्नु भयो । अनि उहाँले भनिहाल्नु भयो, ‘लजमा जाने हो त ?’ मैले पनि कुरा नलुकाइकन भने, ‘हुन्छ ।’हामी लजमा गयौं । एउटा कोठा बुक गरेर भित्र छिर्‍यौं । मैले नै ढोकाको चुकुल लगाएँ । अनि आफ्नो टिशर्ट उचालेर गर्मी भएको छनक पोखेँ । ‘ल भन, के बिचार छ ?’ उहाँले मलाई सोध्नु भयो । ‘मलाई पहिलाको जस्तै बच्चा ठानेको ?’ मैले पनि प्वाक्कै भनेँ ।’हेरौं न त कत्तिको तरुनी भइछस्…’ भन्दै उहाँले आफ्नो जुत्ता खोल्न थाल्नु भयो । अनि क्रमशः लुगा खोल्नु भयो । उहाँको शरीरमा एउटा पेन्टीमात्र थियो । ‘त्यो चाँही किन बाँकी राखेको नि ?’ मैले सोधेँ । यो खोल्ने जिम्मा चाँही तेरो..’ उहाँले भन्नु भयो । मैले झट्टै उहाँको पेन्टीमा हात पुर्‍याएँ, अनि छामे । बिजुली चम्केसरी वेगमा मैले पेन्टी खोलिदिएँ । लत्रक्क परेको लाडो सुम्सुम्याउँदै गर्दा अचानक त्यो त तनक्क तन्कियो । आफ्नो आँखा अगाडी नै उसको आकार त्यसरी परिवर्तन भएको देख्दा म छक्क परिरहेको थिएँ । अनि उहाँले मलाई तँ पनि खोल न त’ भन्दै मेरो कपडा खोल्न संकेत गर्नु भयो । मैले आफ्नो भेस्ट र पाइन्ट खोलेँ । सिर्फ ब्रा र पेन्टीमा थिएँ म । उहाँले त्यो पनि खोल्न भन्नुभयो । मैले पनि उहाँलाई नै खोलिदिन भनेँ । उहाँले बिस्तारै आफ्ना हात मेरो शरीरतिर ल्याउनु भयो ।निकै बेर मेरो छाती सुम्सुम्याएपछि उहाँले आफ्नो हात मेरो ढाडतिर लग्दै ब्राको हुक खोल्नु भयो । ‘साह्रो पोटिलो दुध छ है तेरो त ।’ उहाँले मेरो दुधको प्रशंसा गर्दै भन्नु भयो । मैले केही प्रतिक्रिया जनाइनँ । म मुठी कसेर उहाँको र्स्पर्शको आनन्द लिइरहेकी थिएँ ।मलाई उहाँको शरीर अँगाल्न हतार भइसकेको थियो । अनि मैले च्याप्प समातेँ । ‘अहिले त तँ पनि खप्पिस भइसकेकी छस् कि क्या हो ?’ उहाँले भन्नु भयो । ‘खप्पिस भइसकेकी त छैन, तपाइँले नै बिगारेको त हो नि’ ढाडस पार्दै मैले भनेँ ।’अब खप्पिस भइहाल्छेस् नि,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘सेक्स गर्ने ठिक्क बेला भएको छ तेरो, बेलैमा आनन्द लिन जान्नु पर्छ ।’ मैले केही भनिन । सिर्फ उहाँको स्पर्शलाई स्वागत गरिरहेकी थिएँ । उहाँले मेरा दुधसँग निकै मित्रता गाँसिसक्नु भएको थियो । सुम्सुम्याउने, मुसार्ने र चुस्ने गरिरहनु हुँदा मलाई निकै आनन्द लागिरहेको थियो । म पनि बेलाबेलामा आफ्ना दुध सुम्सुम्याउन पुग्थेँ । निकै कसिला थिए मेरा दुध । अनि उहाँले मेरो ओठमा चुम्बन गर्नु भयो । बेस्सरी ओठ चुस्नु भयो, मैले आफ्नो ज्रि्रोले उहाँको ओठ ठेल्ने कोसिस गरेँ तर उहाँले मेरो ज्रि्रो नै आफ्नो मुखमा हुलेर चुस्न थाल्नु भयो ।अनि उहाँले मेरो पेन्टी खोल्नु भयो र पुती सुम्सुम्याउनु भयो ।पुती वरिपरिका रौं मुसार्न थाल्नु भयो । अनि बेलाबखत औंला छिराउने गर्नुहुन्थ्यो । दुबै हातले पुती फट्याएर हेर्दै औंलाले पुतीको डिल माड्नु भयो । ‘अंकल अझै माड्नु न । मज्जा लाग्यो ।’ मैले आनन्द मान्दै भनेँ । उहाँले कुनै दाग मेट्न लागेझैं माड्नु भयो । म मदहोस भइसकेकी थिएँ ।१६वर्षीय जवान केटीसँग स्वतन्त्र रुपमा खेल्न पाउँदा उहाँ पनि सायद मख्ख पर्नु भएको थियो । मलाई पनि उहाँजस्तो पाको मान्छेलाई आफ्नो शरीर सुम्पन पाएकोमा ढुक्क लागिरहेको थियो । किनकी उहाँले पहिला पनि कुनै जोरजबर्जस्ती गर्नु भएको थिएन । मेरो पीडाको ख्याल गरेरै उहाँले त्यतिबेला मलाई नचिकिकन छोड्नु भएको थियो । फेरि मैले एक पटक त आफ्नो पुतीमा श्रीरामको लाडो पुरै हुलिसकेकी थिएँ ।यसपटक ममा आत्मपवश्वास बढेको थियो । म विनोद अंकलको लाडोलाई सर्लक्क आफ्नो पुतीभित्र निल्ने समयको प्रतिक्षामा थिएँ । तर अझै पनि डर थियो । किनकी विनोद अंकलको लाडो श्रीरामको तुलनामा झण्डै दोब्बर मोटो थियो । श्रीरामको लाडो त बल्ल तल्ल छिरेको ठाउँमा यसलाई कसरी थेग्ने होला भन्ने डर स्वाभाविक थियो ।उहाँले मेरो प्रतिक्षाको घडी अन्त्य गर्ने सुर कस्नु भयो । ‘अंकल.. अलि बिस्तारै गर्नुस् है.. दुख्छ ।’ मैले सुरुमै उहाँलाई सचेत तुल्याएँ । ‘धत लाटी.. तँ जवान भइसकेकी छस् नि, तेरो प्वालमा अब जत्रोसुकै हतियार छिर्न सक्छ । पहिलाजस्तो बच्चा हैनस् नि, छोराछोरी जन्माउनसमेत सक्ने भइसकेकी छस् ।’ उहाँले भन्नु भयो ।उहाँको कुरा सुनेर मेरो आत्मविश्वास अझ बढ्यो । अनि म उहाँको लाडोको सामना गर्न तयार भएँ । उहाँले बिस्तारै छिराउन थाल्नु भयो । सामान्य दुखाइको अनुभव भयो । तर केही बेर उहाँले तलमाथि गर्दै हल्लिएर आफ्नो हतियार स्वात्तै पसाउनु भयो । अनि दनादन पेल्न थाल्नु भयो । मलाई बल्ल सेक्सको स्वाद थाहा भयो । आफू जवान भइसकेकोमा म विश्वस्त भइसकेकी थिएँ । किनकी मैले दुई वटा पुरुषसँग यौन सम्पर्क गरिसकेकी थिएँ । अनि सेक्सको मजा पाइसकेकी थिएँ ।मेरो रहनसहन र फेशनमा सोही अनुसार परिवर्तन भइसकेको थियो । बाटोमा हिँड्दा पुरुषको दृष्टि आफूमा परेको देख्दा मलाई आनन्द र गर्व लाग्थ्यो । उनीहरु मलाई तलदेखि माथिसम्म लोभिएर हेर्नेगर्दथे । सायद उनीहरु मसँग नजिक हुन चाहन्थे । मसँग यौन प्यास मेटाउनु उनीहरुको धोको हुने गर्दथ्यो होला ।एक दिन मेरी साथी दीपालाई भेट्न म सिमरा गएँ । धेरै दिन भइसकेको थियो हामीबीच भेट नभएको । उसको कोठामा बसेर हामी रमाइला कुरा गर्दैथ्यौं । उसलाई रश्मी भन्ने साथीले फोन गरेकी छ भन्दै उसको ममी बोलाउन आउनु भयो । हामी एउटै क्लासमा पढ्ने साथी भएकाले उसका सबै साथी मेरा पनि साथी थिए । तर रश्मी नाम गरेको साथी मैले चिन्न सकिनँ । फोनमा कुरा गरिसकेर ऊ फर्किएपछि उसलाई मैले सोधेँ, ‘रश्मी भनेको को हो ?’उसले मेरो प्रश्नको जवाफ नदिइकनै टार्ने कोसिसमा भनि- ‘छाड्दे न यार ।’ मलाई उसको कुराले चित्त बुझेन । अनि सोधेँ, ‘मैले नचिन्ने पनि तेरो साथी छन् र ?’ तर पनि उसले रश्मीको बारेमा राम्ररी भनिन । मैले कर गरेरै सोधेँ- ‘भन न को हो ? मैले चिन्नु नहुने हो र ?’अनि उसले भनि, ‘सीमराकै एक आइमाइ हो, कोही गेस्ट आएको छ रे । त्यही भएर एक घण्टामा आउनु भनेर बोलाएकी ।’ छक्क मान्दै मैले फेरि सोधेँ, ‘उसको गेस्ट आउँदा तलाई किन बोलाउनु पर्‍यो ?’ उसले मलाई सबैकुरा नबताइ सुखै पाइन ।अनि भनि, ‘एउटा गेस्टसँग बसेर ३-४ घण्टा बिताउँदा ५ हजार पाइन्छ यार । आफूलाई पनि मज्जा, अनि पैसा पनि हुने ।’उसको जाने बेला भइसकेको थियो । उसले भनि ‘बरु हिडँ, तलाई पनि म चिनाइदिन्छु ।’ मलाई उसको कुराले दोधारमा पार्‍यो । उसको घरबाट सँगै निस्कियौं तर बाटोमा उसले धेरै कर गरेका कारण म पनि ऊसँगै गए ।गाउँबाट अलि पर एक तले एउटा घरमा हामी पस्यौं । पाँच कोठे सो घरको बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नासाथ एउटी आइमाइ र दुइ पुरुष देखियो । अरु कोठा बन्द थिए । ती पुरुषले बियर पिइरहेका थिए । अनि आइमाइ चाँही मासु चिउरा खाँदैथिइ ।’बस दीपा । ऊ को हो नी ?’ आइमाइले सोधी । दीपाले जवाफ दिइ- ‘यो मेरो साथी हो, कबिता ।’ हामी एकातिरको सोफामा बस्यौं । मलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो । सामुन्ने बसेका दुइ पुरुषले मलाई र दीपालाई पालैपालो गिद्दे नजर लगाइरहेका थिए ।’केही खाने हो ?’ आइमाइले हामीतिर हेर्दै सोधी । ‘भर्खर खाना खाएको, भै गो केही नखाउँ,’ दीपाले भनि । यत्तिकैमा एउटा पुरुषले भन्यो, ‘चिसो लिए भइहाल्छ नि, कुल भएर बस न ।’आइमाइ जुरुक्क उठेर पल्लो कोठामा गइ दुइवटा कोक लिएर आइ । ‘ऊ पनि मेम्बर नै हो ?’ आइमाइले मतिर इशारा गर्दै दीपासँग सोधि । अनि दीपाले भनि, ‘होइन, मेरो घरमा आएकी थिइ अनि यहाँसम्म मसँगै आएकी ।”कुरा मिले मेम्बर बनाए भइहाल्छ नि,’ अर्को पुरुषले भन्यो । अनि दीपालाई त्यो आइमाइले पल्लो कोठामा लिएर गइ । म ती दुइ पुरुषसामू एक्लै भएँ । उनीहरुको मुखमा हेर्न सकिरहेकी थिइनँ । ‘किन लजाएको ? लाज मान्नु पर्दैन, हामी पनि मान्छे नै त हौं नि,’ एउटाले भन्यो । ‘हैन,’ मैले यतिमात्र भने ।उनीहरुले बियर सिध्याए । उता दीपा र त्यो आइमाइ पनि भित्र छिरे । अनि दीपाले मलाई भनि, ‘काम सकेर सँगै फर्किउला हुन्न ?”हैन म जान्छु,’ उठ्न खोज्दै मैले भने । तर आइमाइले मलाई बसाउँदै भनि, ‘बस न, के हतार ?’ दीपाले पनि थपि, ‘बस् बस् । सँगै जाउँला । एक-दुइ घण्टा त हो नि । घर बेलुकासम्म पुगे भइहाल्छ नि । आखिर घरमा मेरो घर जाने भनेरै आएकी होलिस् ।’मेरो कुनै जवाफ नै नसुनी दीपाले नै भनि, ‘बस्छे बस्छे ।’अनि ती केटाहरु उठे । ‘हामी उता पट्टी कोठामा गयौं है त,’ त्यो आइमाइलाई उनीहरुले भने । उसले पनि मुन्टो हल्लाएर हुन्छ भनि ।’तिमीहरु दुबै जना जाने हो त ? कुरा मिलाउँ ?’ दीपालाई उसले सोधी । दीपा मेरो मुखमा हेर्न थाली । मैले केही भनिन । अनि जोसिदै दीपाले भनि, ‘हिड् यार, आज मेरो मुड पनि थिएन, त्यसमा पनि डबल दिन गाह्रो लागिरहेको थियो, एउटालाई तँ सम्हाल ।’ मलाई तानेर उसले ती केटाहरु भएको कोठामा लगि ।अनि ऊ ती केटासँगै पलङमा बसी । एउटाले दीपालाई सुम्सुम्यायो । अर्कोले दीपाको मुहार समातेर ओठमा चुम्बन गर्‍यो । ‘छ्या.. बियर ह्वास्स गन्हायो,’ दीपाले भनि । ‘यस्तै हो डार्लिङ, सेक्स पावर बढाउनु परेन त ?’ उसले जवाफ दियो ।अनि अर्कोले मतिर संकेत गर्दै भन्यो, ‘बस न । किन उभिरहेकी ?’ दीपाले पनि भनि, ‘आइज न भन्या, बस ।’ अनि अर्को केटाले भन्यो, ‘ठिकै छ नि, पहिला तिमी अनि उसको पालो ।’ दीपाले उसलाई सोधी, ‘डबल नै गर्ने हो र ? सिंगल-सिंगल हुन्न ?’अनि त्यो केटाले भन्यो- ‘दुबैलाई डबल नै गरौंला नि । ”लौ न, झन् सिंगल-सिंगल भनेर यसलाई समेत मनाएको त, मैले डबल गरेकै छैन क्या । डर लाग्छ ।’ दीपाले भनि । अर्को केटाले भन्यो, ‘आज डबलको मजा पनि चाख न त ।’एउटा केटा मतिर आएर मलाई एउटा खाटमा बसायो । ‘तिमी यहीँ बसेर अहिले आनन्द लिइराख । पहिला उसको काम सकौं है त ।’अनि ऊ आफ्नो लुगा खोल्न थाल्यो । अनि अर्कोले दीपाको लुगा खोल्यो । क्षणभर मै दीपा नाङ्गो भइसकेकी थिइ । उसले आफूसँगै नाङ्गिएको केटोको तलदेखि माथिसम्म हेरि । अनि पलङमा खुट्टा तल झार्दै बसी । अर्को केटाले पनि लुगा खोल्न थाल्यो ।पहिलो केटाले दीपाको त्रि्रा सुम्सुम्यायो । अनि मुखमा म्वाइ खायो । दोस्रोले आफ्नो लिंग समातेर दीपाको स्तनमा दल्यो । ‘अहिले नै फोहोर नपार न यार, एक छिन मजा लुट्न दे न ।’ अर्को केटाले भन्यो ।’मजा लुट्न अर्को माल सिंगै छँदैछ नि ।’ पहिलोले भन्यो । अनि दीपाको दु्ध च्याप्प समात्यो । दोस्रोले पुती मुसार्न थाल्यो । दीपाको शरीरमा हलचल भइरहेको थियो । ऊ के गरौं र कसो गरौं भन्ने गरी यताउती शरीर मर्काइरहेकी थिइ ।यत्तिकैमा एउटाले आफ्नो लिंग दीपाको मुखमा दल्यो । मलाई घिन लागिरहेको थियो । दीपाले मुख बन्द गरिरहेकी थिइ । तर त्यो केटाले दीपाको ओठमा लिंगको टुप्पो दल्यो । अनि दीपाको सामुन्ने उभिएर मुखमा लाडो राख्दै ठेल्न थाल्यो । दीपाले अझै मुख खोलेकी थिइन । अनि अर्को केटो पलङमा चढ्यो र दीपालाई आफूतिर तान्यो । उसले दीपालाई हात घुँडा टेकाएर पशुझैं राख्यो । अनि अर्कोले दीपाको मुखमा लाडो दलिरह्यो । पछाडीपट्टी रहेको केटोले दीपाको पुतीतिर लाडो ठेलिरहेको थियो तर बीचमा दीपाले भनि, ‘ऐया, अर्कोमा छिर्‍यो, प्वाल हेरेर त छिराउनु नि ।’ तर त्यो केटाले भन्यो, ‘छिराएकै यसैमा हो नि मैया ।’ दीपाले भनि, ‘त्यसमा त नाइँ… हुँदैन ।’म छक्क परेँ । सायद त्यो केटाले दीपाको चाकमा छिराइरहेको छ । यत्तिकैमा उसले लाडो निकाल्यो र छेउमा रहेको एउटा सीसीबाट कुनै झोल आफ्नो हातमा झार्‍यो अनि लाडोमा दल्न थाल्यो ।एकछिनमा ऊ फेरि दीपाको पछिल्तिरबाटै लाडो सोझ्याउँदै ठेल्न थाल्यो । दीपा झस्किइ । ‘के गर्‍या भन्या..? त्यसमा नगर्नुस् न । अर्कोमा छिराउनु ।’ अनि उसले भन्यो, ‘इङ्गलिस स्टाइल भनेर सात हजार दिएको छु मैया । धेरै नाटक नगर ।’उसले छोडेन । अनि अघिल्तिरकोले पनि दीपाको मुख खुलेको मौका छोपेर लाडोलाई मुखभित्रै हुलिदियो । दीपा ‘उँ…उँ..’ गर्दैथिइ । अगाडीको केटाले उसको टाउको समातेर लाडोलाई भित्र बाहिर गरिरहेको थियो । पछाडीपट्टीको केटाको चाँही के मिलेको थिएन कुन्नि ? अलमल गरिरहेको थियो । उसले लाडोमा फेरि त्यो झोल दल्यो अनि दीपाको चाकमा पनि अलिकति दल्यो ।त्यसपछि घुँडा टेकेर उसले पनि लय समात्यो । दीपाले छट्पटाउँदै भनि, ‘नाइ ममी, म सक्दिन । दुख्यो.. त्यसमा नगर्नुस् ।’ त्यो केटोले भन्यो, ‘मैले तेल दलेको छु । केही हुँदैन । एक छिन सहेर बस न ।’म त्यहाँको दृष्य देखेर भयभीत भइरहेकी थिएँ । पछाडीपट्टीको केटालाई अझै अप्ठेरो भइरहेको रहेछ क्यार उसले आफ्नो साथीलाई भन्यो, ‘तँ पलङमा सुतेर काम गरा न, म त्यताबाट गर्छु’अनि उनीहरुले आसन फेरे । एउटा केटो उत्तानो परेर सुत्यो अनि उसले आफ्नो लाडो दीपालाई चुसाउन थाल्यो । हात र घुँडा टेक्दै पशुसरी बसेकी दीपाको चाकमा अर्कोले भुइँमै उभिएर लाडो छिराउन थाल्यो । अब भने मैले पनि दीपाको चाक राम्ररी देख्न पाएकी थिएँ ।
त्यो केटोले दीपाको चाकमा औंला पसायो । अनि केही खोतलेजस्तो गर्‍यो । चाकको प्वालमा बेस्सरी खोतल्यो, दुबैतिर हात राखेर फट्यायो । भित्रको रातो भाग देखिन्थ्यो । अनि उसले चाक च्यात्दै लाडोको टुप्पो छिरायो ।दीपाले चाक हल्लाइ । सायद उसलाई दुखेको हुनु पर्दछ । तै पनि उसले अर्को केटाको लाडो चुस्न छाडेकी थिइन । मैले सोचेँ ऊ सात हजार रुपयाँका लागि त्यत्रो संघर्ष गरिरहेकी छ । अनि कल्पना गरेँ, ‘मेरो पनि यस्तै हालत हुन्छ होला । म त यस्तो गर्न दिन्न । गराइ हाले पनि दीपाले भने झैं बरु पाँच हजारमात्र लिन्छु, चुस्ने र चाकमा छिराउने काम गर्न दिन्नँ ।’दीपाको चाकमा त्यो केटाले बिस्तारै बल लगायो । दीपाले अर्को केटाको लाडो मुखबाट निकाल्दै पीडा भरिएको आवाजमा भनि, ‘ऐया ममी…, दुख्यो… आइ….।’ तर उसले लाडोलाई त्यहाँबाट निकालेको थिएन । बरु एकछिन रोकेर फेरि ठेल्न थाल्यो । ‘मरे…बा । दुख्यो …’ दीपा उठ्न खोज्दै थिइ तर उसले दीपाको कम्मर दुबै हातले समात्यो र अर्को केटाले दीपालाई अँगालेर उठ्न दिएन । सुतिरहेको केटाको छातीमा दीपाको स्तन अडिएको थियो । अनि दीपाको अनुहार चाँही उसकै कुममा घोप्टिएको थियो, अनि पछाडीतिरको केटाले लाडोलाई बल लगाएर ठेल्यो । दीपा चिच्याइ, ‘नाइ… मरे….।’त्यो केटाले लाडो निकाल्यो । दीपाको चाक त ह्वाङ्ग भएको थियो । उसको चाकको मुख ‘आँ’ परेको थियो, भित्रको केही भाग देखिन्थ्यो । अनि त्यही मौकामा उसले चाक भित्र औंलाले तेल दल्यो र आफ्नो लाडोमा पनि राम्ररी दल्यो । ऊ फेरि पुरानै काममा लाग्यो । आफ्नो हातले च्याप्प लाडो समाएर दीपको चाकमा सोझ्यायो अनि ठेल्यो ।’आमा… मरेँ ।’ दीपाको आवाजमा पीडा स्पष्ट गुञ्जियो । हेर्दाहेर्दै उसको लाडो स्वात्त छिर्‍यो । ‘नाइँ.. दुख्यो…।’ दीपाले करुणादायी स्वर निकाली । उसले लाडो स्वात्त बाहिर निकाल्यो, दीपाको चाक हृवाङ्ग परेको थियो । अनि उसले फेरि लाडो छिरायो । यसो गर्दा गर्दै उसले लाडोलाई भित्रबाहिर गरि दनादन पेल्न थाल्यो । उसको पेलाइसँगै आवाज निस्किरहेको थियो, ‘प्वाक.. प्वाक..। ‘एकछिन पछि ऊ स्थिर भयो । अनि तलतिर रहेको केटाले पनि पुतीतिर लाडो सोझ्यायो । अब त दीपाको दुबै प्वालमा लाडो खाँदियो । ‘ऐया.., ऐया…’ दीपाको आवाज निस्किरहेको थियो । केटा मान्छेलाई प्वाल भए पुग्ने रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो । चाक पनि बाँकी राख्दा रहेनछन् । दीपा पछि मेरो पालो निश्चित थियो । उसको दर्ुदशा देखेर मैले त्यस्तो सहन सक्ने आँट गरिनँ । उनीहरु आफ्नो काममा व्यस्त रहेको मौका छोपी म बाहिर निस्कनका लागि ढोका खोल्न पुगेँ । तर बाहिरैबाट ढोका बन्द गरिएको रहेछ । ती केटामध्ये एकले मतिर हेर्दै भन्यो, ‘हामीले नभनि अब ढोका खुल्दैन रानी । ‘चाकतिर हुलिरहेको केटाले केहीबेरमा लाडो झिक्यो र हातले खेलायो । उसको लाडोबाट बिर्यको फोहोरा छुट्यो दीपाको ढाडमा । दीपाले बीर्य खसेको ठाउँमा हात लगि, उसको हातभरी लाग्यो । उसले तन्दामा हात दली । अनि उत्तानो परेको केटाले दीपालाई सर्लक्क पल्टायो र आफू दीपामाथि घोप्टिएर दनादन पेल्न थाल्यो । दीपा उँ.. उँ.. गर्दै थिइ । केही बेरमा ऊ पनि शान्त भयो । उसले चाँही दीपाको पुतीमै बीर्य झार्‍यो । ‘आमै..भित्रै झारेको ?’ दीपाले भनि । केटो केही बोलेन । अनि ती केटाहरु पलङमा पल्टिएर सुस्ताउन थाले । सायद उनीहरु निकै थाकेका थिए । मैले सोचेँ यिनीहरुलाई अब पुगिसक्यो । मलाई त्यसै छोड्लान् । तर मेरो सोचाए गलत रहेछ । टेबलमा रहेको पmुटी खाँदै एउटाले भन्यो, ‘आउ न मैया, यता बस ।’ म आफ्नै ठाउँमा बसिरहेकी थिए । अर्कोचाँही जुरुक्क उठेर मतिर आयो र मलाई च्याप्प समातेर उही पलङमा पुर्‍यायो । दीपा पनि लखतरान भएर पल्टिरहेकी थिइ ।दुबै केटा मिलेर मलाई नांगै बनाउन थाले । उनीहरु ममाथि यसरी झम्टिए कि मानौं उनीहरु भोको बाघले बाख्रा भेटेझैं देखिन्थे । म निकै डराएँ । एउटाले योनी मुसार्न थाल्यो, अर्कोले मेरा दुध सुम्सुम्यायो । दीपा बेलाबेलामा मलाई हेर्थी । दीपाको हालत राम्ररी देखिसकेको हुनाले मैले ती केटाहरुको प्रतिवाद गर्न खोज्नु बेकार थियो । उनीहरुमा दया, माया थिएन ।एउटाले मेरो दुध बेस्सरी चुस्यो, मासु नै लुछिएला जस्तो भयो । ‘दुख्यो, बिस्तारै गर्नुस् न ।’ मैले भनेँ । ‘पोटिलो छ यार,’ उसले दुध चुस्दै भन्यो । अर्कोले दुबै हातले पुती च्यात्दै भन्यो, ‘यो पनि टाइट नै छ त यार ।’अनि पुती च्यात्दै गरेको केटो जुरुक्क उठ्यो र आफ्नो साथीलाई भन्यो, ‘यार यसलाई टेस्ट गरौं न, एक छिन मलाई फ्री छोड त ।’ अर्को केटाले उसको आदेश मान्दै मलाई छोड्यो । त्यसपछि उसको साथीले मलाई उत्तानो पारेर सुतायो । उसले मेरा दुबै तिघ्रालाई आफ्नो काँधमा चढायो र घुँडा धसेर बस्दै आफ्नो लाडोलाई मेरो पुतीमा जोड्यो । अनि उसले भित्र ठेल्न थाल्यो । ‘वाह, टाइट छ यार ।’ उसले भन्यो । ‘खै.. म पनि टेस्ट गरौं न,’ अर्कोले भन्यो । अनि पहिलो केटोले सरक्क आफ्नो लाडो झिम्यो । दोस्रोले पनि मलाई उही आसनमा राख्दै आफ्नो लाडो पसाउन थाल्यो । ‘हो त यार.. यो पो प्वाँट रहिछ ।’ अनि उसले लाडोलाई बिस्तारै गहिराईमा ठेल्यो । ‘ओह.. ‘ मेरो मुखबाट आवाज निस्कियो । उसमा जोश आइसकेको थियो, म पनि भयमिश्रति जोशमा नै थिएँ । ‘च्याप्प समातेको छ यार, टाइट रहेछ,’ उसले लाडो ठेल्दै भन्यो । अनि फटाफट पेल्न सुरु गर्‍यो । ‘स्वाट स्वाट पेल्दा मलाई पनि आनन्द लागि रहेको थियो । मलाई कुनै बेला दुखेजस्तो पनि भइरहेको थियो । अनि आफ्ना हातले उसलाई पछाडी ठेल्थेँ, तर उ भने मलाई जोडले समातेर फटाफट आफ्नो काम गरिरहेको थियो । तीन चार मिनेटसम्म यो क्रम चलिरह्यो । त्यतिबेला मलाई पोल्न थालिसकेको थियो । उसको गति पनि निकै बढिसकेको थियो । ‘भयो.. भयो…’ मैले भनेँ । उसले छोडेकै थिएन । बरु अर्कोचाँहीले मेरो दुधमा मुन्टो जोत्यो । अनि दुबै दुधलाई पालै पालो चुस्न थाल्यो । मलाई चिकिरहेको केटा केही बेरमा मेरो जिउ नै सिरिङ्ग हुने गरी लम्पसार पर्‍यो । उसले आफ्नो बिर्य झारिसकेको थियो ।मैले राहतको सास फेरेँ । तर अर्कोले मेरो पुती रुमालले पुछ्न थाल्यो । ‘साला.. सबै भित्रै पो झारेछ,’ उसले भन्यो । अनि उ तम्सियो ममाथि । मैले उसलाई सम्झाउने प्रयास गर्दै भनेँ, ‘नाइ.. अब नगर्नुस् प्लीज.. म सक्दिनँ ।’ तर ऊ किन मान्थ्यो र ? मेरा खुट्टा फट्याएर लम्पसार पर्दै उसले छिराउन थाल्यो । यस पटक मलाई साह्रै गाह्रो भयो । ‘नाइ भन्या.. दुखिरहेको छ, मलाई छोड्नुस् प्लीज..।’ मैले भनेँ । अनि त्यो केटाले आफ्नो साथीलाई भन्यो, ‘ओइ यसको मुख बुझो लगा त..।’ त्यसपछि अर्को केटो मेरो मुखतिर आएर आफ्नो लाडो झुन्ड्याउन थाल्यो ।उसले मेरो ओठमा लाडो दल्यो । चिसो लाडो देखेर मलाई सिकसिको लाग्यो । मैले आँखा चिम्लिदै भनेँ, ‘म यस्तो काम गर्दिन, छोड्नुस् भन्या ।’ तर उसले मेरो दुबै गाला एकै हातले दबाउँदै मुख खोल्यो र लाडो पसायो । रसाइरहेको उसको लाडो मुखभित्र छिरिसकेको थियो । मेरो मुखभरी थुक जम्मा भयो, त्यो पनि चिप्लो । उसले मुखमा लाडो कोचेको कोच्यै गर्‍यो । अर्कोले फटाफट पुतीमा पेलिरहेको थियो । मैले आफ्नो शरीर पूर्णरुपमा उनीहरुलाई सुम्पिनुको कुनै बिकल्प थिएन । अनि मैले कुनै प्रतिवाद नै नगरी आफ्नो पीडा जसरी भए पनि सहन निधो गरेँ । ‘मरेँ ममी.. मलाई मार्‍यो ।’ मनमनै भनिरहेँ तर मेरो मुखबाट आवाज निस्किन सकेको थिएन किनकी मुखभरी उसको घोर्ले लाडो कोचिएको थियो ।अनि पुतीमा पनि उस्तै मोटो मुस्लो उफ्रीरहेको थियो । म छट्पटाउन थालेँ, उनीहरु शिथिल हुने प्रतिक्षामा म सहँदै गएँ । तर उनीहरु झन् चम्किरहेका थिए । हुँदा हुँदै मलाई चिक्ने केटा उठ्यो । अनि उसले मेरा तिघ्रालाई काँधमा राखेर बेस्सरी समात्दै मेरो चाक केही उठायो । अनि टुक्रुक्क उभिएर चिक्न थाल्यो । नाभीतिरै उसको लाडो धसिएको थियो । धेरै कष्ट सहिसकेपछि उसले पनि पुतीभित्रै आफ्नो रस खसाल्यो । त्यसपछि मनमनै उनीहरुलाई सराप्दै म उठेँ ।त्यो आइमाईबाट ७-७ हजार रुपयाँ लिएर हामी निस्कियौं । बाटोमा केहीबेर त दीपा र म बीच बोलचालै भएन । अनि पछि मैले नै भनेँ, ‘तैले गर्दा आज यस्तो सास्ती खेप्नु पर्‍यो ।’ उसले भनि, ‘सालाहरु यस्तो रन्किएका छन् भन्ने के थाहा ? यसरी दुइटालाई कहिल्यै सम्हाल्नु परेको थिएन ।’”तलाइँ त अझ ठाउमै मात्र गरेका छन्, मेरो त चाक पनि बाँकी राखेनन् सालाहरुले,” दीपाले भनि । हुन पनि उसलाइ त चाक नै च्यातिनेगरी पो छिराएका थिए त । “तर मैले पनि दुइटालाइ पो थेगेँ त,” मैले भनि । “राँडाका छोराहरुले भित्रै झारिदिए, त्यो पो टेन्सन छ त,” दीपाले भनि । “किन र ?” मैले सोधेँ । आमा बनिएला भनेर नि जाँठी, त्यति पनि बुझ्दिन ।” उसले भनि । अनि पो मेरो सात्तो गयो । मैले त तीनै पटक अरुको बिउ भित्रै लिएकी थिएँ ।
त्यो बेला मेरो उमेर त्यस्तै १४ बर्स भयेको थियो होला म काठमान्डौ मा १ ईन्डियन ब्यापारि को घर मा काम गर्न बसेको थिय। म बिहन पढ्न जान्थ...
मेरो अफिस तराई तिरको ठुलो कम्पनि थियो । हामि १० बर्सदेखि त्यो कम्पनिमा सङै काम गर्ने हुदा निरजन र म धेरै नै मिल्ने सथि म्है सकेको थियो। नि...
मेरो नाम सुजाता हो अहिले मेरो उमेर २ १ बर्षा हुन लाग्यो । म् अब मेरो जिन्दगी मा घटेको एउटा सत्य घटना भन्न जादैछु। म सानै देखिबाट इन...
त्यति बेला मेरो उमेर त्यस्तै १६ भयेको थियो होला। घरमा म यक्लि छोरि हुनाले घरको रेखदेख सबै म नै गर्थे। म बिहान बिहान पढ्न जान्थे। बाकि दि...
उनी मेरो गाउँ भन्दा अलिक तलको थिईन तर भैरहवामा बस्थीन कुनै बेङ्कमा काम गर्थिन।तर धेरै समय भएको थियो हाम्रो भेट नभएको।मैले उनलाई भेट्न आग...
अश्लील फिल्म हेरेपछि मलाई आफ्नो शारीरिक बनावट, पुरुषसँगको सम्बन्धप्रति नयाँ धारणा जागृत भयो । राति सुत्दा ओछ्यानमा म आफ्नो स्तन खेलाउने, पु...
गाउमा एकजना मामा मामा भनेर बोलाउने को भाईको बिहेमा गएको थिए निक्कै रमझम थियो अनी जाडो पनि निक्कै थियो झन्डै हल्का...
ऊ सानैदेखि मसँग खुब चल्थी । पछाडिबाट आएर पलाई भ्वाक्क हिर्काएर हिड्थी । सारै चञ्चले थिई कबिता । म जागिरे भएको दुई वर्षपछि गाउँबाट काठमाडौं...
बीएस्सी दिएर त्यसै बस्दा हात-मुख जोड्न ठूलो समस्या पर्ने भएकाले जागिरको खोजीमा लागेँ। सोर्सफोर्स नहुनेका लागि काठमाडौँमा जागिर पाउनु भनेको...
कलिलो दुध माड्दै चिक्नुको मजा
toolbar maker toolbar maker toolbar maker कुरा आज भन्दा ७-८ बर्ष अगाडीको हो , म कामको सिलसिलामा ईलाम गएको थिए । आफ्नो सबै काम स...
Copyright © 2011 Nepali LOL News | Design by KHABAREXPRESS NEPAL